ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/09/12
~~~ သိစေ ~~~
အကြံမမှား ၊ ရန်မပွားချင်
အမှန်တရားက ငါတို့လက်တွင် ...
မမှန်မော်ကြွား ၊ ရန်စော်ကားလျှင်
တရားလက်တွင် ဓါးနှင့်ယှဉ်မည် ...
ဓါးလည်း ပြောင်၏ ...
ဓါးလည်း သွေး၏ ...
မှားကွက်ဖွေရှာ သင် ငါတို့အား
မတန်တရာ ရန်မစွာနှင့် ...
ငါတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြ၏ ...
၉ - ၆ - ၂၀၁၂။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:37 PM No comments:
ရိုဟင်ဂျာ (သို့မဟုတ်) Al-Qaeda တို့ ၏ မဟာဗျူဟာ "
ကျွန်တော့် ဖခင် ကွယ်လွန်သူ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ထွန်းထွန်းနိုင် (ခ) ဦး နောင်ထွန်းလွင် ဟာ ရခိုင် တစ်ဝက် စပ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ခုတစ်လော ဖြစ်နေတဲ့ ကုလား ရခိုင် သတ်ဖြတ်မှုတွေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာ တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော ရခိုင်စပ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ နက်ရှိုင်းစွာ နာကျင်ခံပြင်းရတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ဒေါသကို ရှေ့တန်း မတင်ဘဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးစားပေးတွေးခေါ်ဖို့ လူတွေကို တိုက်တွန်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြင်နေကြားနေရတာတွေ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒေါသထက် ပို အရေးကြီးတဲ့ အသိတစ်ရားတစ်ခု ရဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ ကျွန်တော် ဆက်စပ်တွေးတောလေ့လာရင်း ..
ဖတ်မိသမျှ သိရှိသမျှတစ်ချို့ကို ဆက်စပ်တွေးကြည့်မိတဲ့ အခါမှာ ..
လူတွေ မတွေးမိခဲ့တဲ့ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းပြီး လျှို့ဝှက်နက်နဲ တဲ့ လူမျိုးရေး စစ် မဟာဗျူဟာ တစ်ခု ကို တွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။
ဘာတွေ ဘယ်လို စဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကတော့ အားလုံးလဲ နား နဲ့ မျက်စေ့ နဲ့ မဆန့် အောင်ကို ကြားပြီး မြင်ပြီး ဖြစ်လောက်ပြီမို့ အကျယ်တဝင့် မရှင်းပြတော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စ ကို သတိကြီးစွာ ထားပြီး ပြန်သုံးသပ်ကြစို့။
မသီတာထွေးဆိုတဲ့ ကလေးမ လေး ကို ရိုဟင်ဂျာ ၃ ယောက် မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စဟာ သွေးရိုးသားရိုး ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စ အပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဒေသခံ ရခိုင် လူမျိုးတွေရဲ့ ဒေါသတွေဟာလဲ သဘာဝကျတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလို့ဘဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိ ရာဇဝတ်မှုကို တုံ့ပြန်တဲ့ ဘင်္ဂါလီ (ခ) ရိုဟင်ဂျာ ကုလား တွေရဲ့ မိုက်ရိုင်းစွာ တိုက်ခိုက်မှုတွေကရော ရိုးသားပါရဲ့လား။
ဒီဒေါသတွေ ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ ဟာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး တစ်ခု ရဲ့ အစွဲ သီးသန့် ကြောင့်လားဆိုတာတွေ ကို ဆက်စပ်တွေးကြည့်မိစရာတွေ ရှိလာပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် အမြဲ တွေးထားဖူးတဲ့ သီအိုရီ တစ်ခု ကို ထည့်ပြောပြမှရပါတော့မယ်။
မြန်မာ ပြည်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဖြစ်လိုက်တိုင်းလဲ သေချာ လက်သည်မပေါ်ခဲ့သလို မိခဲ့ရင်လဲ ထိုသူဟာ ဘယ်အကြမ်းဖက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုသူရယ်လို့လဲ တိတိပပ ထွက်ဆိုလာတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ။
ဒီမှာတင် ဖြစ်နေကြ ကောလဟာလ နှစ်မျိုး အမြဲ ထွက်လာပါတယ်။
အစိုးရ က လဲ ဒါ အတိုက်အခံတွေ ဖြစ်တဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များ နှင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို အရင် ဆုံး စွပ်ဆွဲလေ့ရှိသလို
အတိုက်အခံတွေဖက်ကလဲ ဒါ အစိုးရ ရဲ့ ပြနေကျ နိုင်ငံရေး မျက်လှည့်တစ်ကွက်ဆိုပြီး တန်ပြန်စွပ်ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒိလို ဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော် နှစ်ဖက်လုံးက သုံးသပ်ချက်တွေကို မယုံခဲ့ပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ...
(၁) အစိုးရ ဟာ ပြည်တွင်း မငြိမ်သက်မှု မရှိတော့ပါဘူး ဆိုတာကို နိုင်ငံတကာ ကို အတင်းကြီးတောင် ဖန်တီးပြီး လုပ်ပြနေခဲ့တာကြာပါပြီ။
ဒါမှလဲ သူတို့ဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကောင်းရမှာ ဖြစ်လို့ပါဘဲ။
ဒီတော့ ဒီလို ကိစ္စ တွေ ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လုံးဝ မလိုလားဘူးဆိုတာ နားလည်သင့်ပါတယ်။ အများစု ယုံကြည်နေကြသလို တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်လို့ အာဏာ ပြန်သိမ်းရပါတယ်ဆိုတဲ့ ကလေးဆန်ဆန် ကျားကွက်ကိုရွှေ့ဖို့ ဒီလို လုပ်စရာ မလိုဘူးဆိုတာ စစ်ဗျူဟာမှုးတွေ ကောင်းစွာ နားလည်ထားကြပါတယ်။
(၂) အတိုက်အခံတွေ ဆိုသူတွေ ကိုသေချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပြန်ရင်လဲ အုပ်စု ၄ ၅ ခု လုံးမှာ တူညီတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေ ရှိပါတယ်။
ABSDF ဆိုရင်လဲ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ ပြည်သူ့ရင်သွေး ကျောင်းသားတွေကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အတွက် သူတို့ဟာ ပြည်သူလူထုကို ဘယ်တော့မှ နာကျင်အောင် လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ KNU KIA DKBA အပါအဝင် အခြားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဟာလဲ ..
ဦးနေဝင်း အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီးကထဲက ဗိုလ်ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကတိတွေ အားလုံး ကို ဖေါက်ဖျက်ခဲ့တာကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ ..
မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေ နဲ့ တည်ထောင်ထားကြတဲ့အတွက် သူတို့ဟာလဲ ပြည်သူလူထုကို ဘယ်တော့မှ နာကျင်အောင် လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ အားလုံးဟာ မြန်မာ စစ်တပ် နဲ့သာ ထိပ်တိုက် ပစ်ခတ် တိုက်ပွဲဝင်နေကြပေမယ့် သူတို့ သွေးချင်းတွေ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ကို ဘယ်တော့မှ ပစ်မှတ် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီတော့ ဘာလို့ ဒီလို ဗုန်းတွေ ခဏခဏ ထ ထ ကွဲ နေလဲ ...
ဘယ်သူတွေ က ဒီလို မျိုး ဖျက်ဆီးမှုတွေကို လုပ်ချင်မလဲ ...
တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ရခါနီးပြီဆိုတိုင်း အစိုးရ နဲ့ ပြည်သူ နဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ ကြားမှာ သုံးပွင့်ဆိုင် သံသယတွေ ကြီးထွားလာအောင် အမုန်းရဲ့ မီး ကို ဘယ်လိုလူတွေက ဘာရည်ရွယ်ချက် နဲ့ မွှေးနေတာလဲ ...
ပြည်ထောင်စု မငြိမ်သက်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်သူတွေမှာ တိုက်ရိုက် အကျိုးရှိမလဲ ...
အေးချမ်းငြိမ်သက်သွားပြီဆိုရင် ဘယ်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို စထိခိုက်လာနိုင်မလဲ ...
ဒီ War Monopoly ကို နောက်ကွယ်ကနေ ဘယ်သူတွေက စနစ်တကျ စီမံဖန်တီးနေတာလဲ ...
ဒီမှာ ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေ စကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ကြောင့် အမေရိကန် အင်္ဂလန် စတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ နဲ့အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မြန်မာ အစိုးရ မျက်နှာပန်းစပွင့်လာမှုကို လုံးဝ မနှစ်သက်နိုင်သူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားသိသာလာပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အမေရိကန် မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အရမ်း ခိုင်မာလာမှာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီ ဘုံရန်သူဟာ အမေရိကန် နဲ့ မဟာမိတ် နိုင်ငံတွေ ကို မုန်းနေသူတွေ ဖြစ်သလို မြန်မာ နိုင်ငံကို ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်နေသူတွေဆိုတာ ထင်ရှားလာပါတယ်။
မြန်မာတွေ ဆီက ဘာတွေ ကို အမြတ်ထုတ်နေတာလဲ ... ?
အဖြေ က " ဘိန်း " ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလမ် ဘာသာ ကို ကာကွယ်သူများဆိုပြီး အမည်ခံထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကြီး " Al-Qaeda " တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က ပင်မ စီးပွားရေး သွေးကြောကြီးဟာ ဘိန်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှ နိုင်ငံတွေ အားလုံး ကို ဝင်ရောက်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဘိန်း မှန်သမျှ ဟာ မြန်မာ့နယ်စပ်ကနေတဆင့် အာဖဂန်နစ္စတန် ပြီးတော့မှ ဥရောပ နဲ့ အမေရိကန် အပါအဝင် ကမ္ဘာ အနှံ့အပြားကို ဖြန့်ချီနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် သူတို့ ရဲ့ အလုံခြုံဆုံး ဗဟို နေရာကို နိုင်ငံတကာ နဲ့ ( အဓိက အမေရိကန် နဲ့ ) အပြန်အလှန် သံတမန် ဆက်ဆံရေး မရှိဆုံး ဖြစ်တဲ့
လာဘ်စားမှု ကြောင့် ဘာမဆို ဖျောက်ဖျက်နှုတ်ပိတ်လွယ်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံကို သူတို့ရဲ့ ပင်မ ဒုစရိုက် ဌာန တစ်ခု လို ခံတုတ်ကျင်းလို ရွေးချယ် အသုံးချခဲ့ကြတာ သဘာဝကျတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါဘဲ။
ဒီတော့ ခုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ မှာ ကြည့်ရင် စတုန်းကတော့ ကုလား ၃ ယောက် ရဲ့ မိုက်မဲမှု နဲ့ စတင်ခဲ့ပေမယ့် ဆက်နွယ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဘာသာရေး နဲ့ သိသိသာသာ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှု ရဲ့ အနံ့တွေ ရောယှက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အရမ်း ပါးနပ် ဖို့ လိုနေပါပြီ။
ဒါဟာ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ တစ်ခုထဲမဟုတ်တော့သလို
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း စစ်စစ်လဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
စနစ်တကျ စီမံဖန်တီးလိုက်တဲ့ အိမ်ကြက်ခြင်း အိုးမဲသုတ်မှု တစ်ခုပါဘဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို လူမျိုးစု အနေနဲ့ တောင်းဆိုနေတာတွေ ..
ကိုယ်ပိုင် နယ်နိမိတ်ရအောင် အတင်းတောင်းဆိုနေတာတွေ ..
အားလုံးဟာ ဒီမသမာသူ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ကမ္ဘာမှာ နောက်ဆုံး အခိုင်အမာ ခြေကုပ်ယူဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့
(၁) နိုင်ငံရေး ရှုပ်ထွေးမှုတွေ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ Internal Corruptions တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့နိုင်ငံ
(၂) ဘိန်း စိုက်ပျိုးဖြန့်ချီ ဖို့ ရေမြေအနေအထား အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံ
(၃) မြန်မာ အစိုးရ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး မပြေလည်မှုကြောင့် DEA (Drug Enforcement Administration) ခေါ် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ကြီး) ရဲ့ မစွက်ဖက်နိုင်ဆုံး နိုင်ငံ
အဲ့ဒိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမိ မြန်မာနိုင်ငံကို သူတို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတော့တာပါဘဲ။
မိတ်ဆွေတို့ အားလုံး အခု ကျွန်တော် တင်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို ခေါင်းအေးအေးနဲ့ သေချာ နက်နက်နဲနဲ တွေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အစ္စလာမ် ဘာသာအရေခြုံထားတဲ့ " Al-Qaeda " ဒုစရိုက် အဖျက်သမား တွေ ရဲ့ ပရိယာယ် တွေကြားမှာ ကျွန်တော်တို့ လှပစွာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
ဒီ ကိစ္စ က နေ စတင်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ကနေ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံး မိစ္ဆာတွေရဲ့ ပိုက်ကွန်ထဲကို ကျရောက်ဖို့ လက်မတင်လေးဘဲ လိုပါတော့တယ်။
လက်ရှိ အစိုးရအပါအဝင် တပ်မတော် သားတွေ အပေါ်
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ..
မိဘ ပြည်သူတွေ ..
အားလုံးခံစားနာကျည်းခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေကို ခဏလေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ မေ့လိုက်ကြဖို့လိုနေပါပြီ။
ခု အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့ ဟာ စက္ကန့်တိုင်းမှာ အသက်တမျှ အရေးကြီးနေပါပြီ။
ထစ်ကနဲ ဆိုတာ နဲ့ စစ်တပ် ကို စွပ်ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပြည်သူတွေကလဲ မေ့ဖျောက်ပစ်ပါတော့။
ထစ်ကနဲ ဆိုတာနဲ့ ကျောင်းသားတွေ တိုင်းရင်းသား (သူပုန်) တွေ လက်ချက်လို့ စွပ်ဆွဲတတ်တဲ့ အစိုးရ ရဲ့ သီအိုရီ ကိုလဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မေ့ပစ်လိုက်ပါတော့။
ထီကနဲဆို နီးရာ နိုင်ရာ တွေ့ကရာ ကုလား ကို ဆော်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သေးသိမ်တဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်တွေကို ဖျောက်ကြပါ။
သူတို့ကသာ မွတ်ဆလင်တိုင်း အကြမ်းဖက်သမား မဟုတ်ဘူးပြောနေကြပေမယ့်
အကြမ်းဖက်သမား အားလုံးကတော့ မွတ်ဆလင်တွေပါဘဲတဲ့။
ဒါဟာ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ သေချာ ပြောင်းပြန်တွေးကြည့်ရင် မမှန်ကန်သေးပါဘူး
အကြမ်းဖက်သမားတွေ အကုန်လုံးက မွတ်ဆလင်တွေ ဖြစ်နေတာနဲ့
မွတ်ဆလင်တိုင်း အကြမ်းဖက်သမား ဖြစ်ရမှာလား လို့ သေချာပြန်တွေးပါ။
ဒါးပြမှု ကျူးလွန်သူ အများစုဟာ အမျိုးသားတွေ ဖြစ်နေတာနဲ့
အမျိုးသားအများစုဟာ ဒါးပြတွေပါလို့ တွေးလို့မရဘူး ဆိုတာ ဆင်ခြင်ကြပါ။
တစ်ကယ့် တရားခံ ရန်သူ အစစ် က ဘွားကနဲပေါ်လာနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ ဆယ်စုနှစ် ငါးခု မက ခွာချထားခဲ့တဲ့ လက်တွေ ပြန်တွဲဖို့ အရမ်းလိုအပ်နေပြီ။
အရေးကြီးရင် သွေးနီး မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အားလုံး လက်ခံကြပါ။
တစ်ကယ်တမ်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ နဲ့ စစ် ဖြစ်လာရင် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အားကိုးရာ ဟာ စစ်တပ် တစ်ခုထဲ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တပ်မတော် နဲ့ လက်တွဲပြီး ကမ္ဘာ မှာ မရှိသင့်တော့တဲ့ မိစ္ဆာဒိဌိ တွေကို မျိုးဖြုတ်ပစ်ကြရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။
ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ တစ်သက်လုံး ကြီးပြင်းလာပြီး ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ထပ်တူ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ အေးချမ်းမှု လိုလားသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို သူတို့ မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့မှု တစ်ခုအတွက် နဲ့ အလကား မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။
အဲ့ဒါ ဟာ " Al-Qaeda " တွေ စီမံဖန်တီးယူနေတဲ့ မဟာဗျူဟာရဲ့ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းမှု လိုလားသူ မြန်မာပြည်တွင်း ဆွေစဉ်မျိုးဆက် မွေးဖွား နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် စစ်စစ်တွေ အားလုံးကလဲ ခုချိန်ကစပြီး
မိမိတို့ဟာ မြန်မာတွေ နဲ့ တစ်သားထဲရှိနေပါတယ် ဆိုတာနဲ့ ..
ခု အကြမ်းဖက်မှုတွေ အားလုံးကို မိမိ တို့ လုံးဝ မထောက်ခံဘူး ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပါတယ် .. ဆိုတာရယ်
လိုအပ်ရင် မြန်မာ ပြည်သူတွေ ဖက်က မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသား စိတ်ဓါတ် အပြည့်နဲ့ အစွန်းရောက် အဖျက်သမားတွေကို ကူညီ တိုက်ခိုက်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောထားကို သိသာထင်ရှားအောင် အပြောရော အလုပ်နဲ့ပါ ထုတ်ဖေါ်ပြသကြပါ။
အဓိကရုဏ်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် မိမိတို့ဟာ မြန်မာပြည်ဖွား ကုလားလူမျိုးဆိုတာ ကို သိသာအောင် အဝတ်အစား သင်္ကေတ တစ်ခုခု နဲ့ ပြသဖို့ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ မြန်မာ တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေ သက်သေထားပြီး တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းထားပါ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အမိနိုင်ငံတော် တိုင်းတစ်ပါးကျွန် မဖြစ်ရေးအတွက် တပ်မတော် နဲ့ ပြည်သူ အတူတူ လက်တွဲပြီး မိစ္ဆာဒိဌိတွေကို မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ ပပျောက်သွားအောင် စည်းလုံးစွာ ပါးနပ်စွာ ရဲရင့်စွာ တိုက်ထုတ်ပစ်ကြရတော့မယ်။
ဒါ ငါတို့ နိုင်ငံ
ဒါ ငါတို့ ဘာသာတရား
အမျိုးပါပျောက်သွားစေရမယ် .. ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို ၂၄ နာရီလုံး မပြတ် နှလုံးသွင်းထားကြပေတော့။
(ယ္ခုစာနှင့် ဆက်နွယ်သုံးသပ်နိုင်ရန် အောက်ပါ ဆောင်းပါးကို ပူးတွဲ ဖေါ်ပြလိုက်သည်)
International Terror Links
င် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုနှင့် နိုင်ငံခြားဘာသာရေးအဖွဲ့များ၏ အကူအညီထောက်ပံ့မှုကို ရယူမှုမှာ အရေအတွက်အားဖြင့်နည်းပါးသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မတူညီသည့်အချက်မှာ မူဆလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစ္စလာမ္မစ်အဖွဲ့အ
စည်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုများ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) သည် ဘင်းဂလားဒေ့ရှ် ၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့တွင် အခြေစိုက်သော အစွန်းရောက်မူဆလင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များနှင့် သိသာစွာဆက်သွယ်မှုများရှိနေသည်ကို ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကပင် နိုင်ငံတကာမှ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) သည် တည်ထောင်စဉ်အချိန်မှရည်ရွယ်ချက်မှာ ကောက်ဘဇား (Cox’s Bazar) နှင့် စစ်တကောင်း (Chittagong) နယ်များအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများ၏ အကျိုးအတွက်ဟုဆိုသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများ နေထိုင်ရာဒေသများကိုစုပေါင်းကာ မူဆလင်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်န
ယ် ထူထောင်ရေးအဖြစ် ပြောင်းလဲလာသည်။
ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရာတွင် လက်နက်ကိုင်အင်အား ရာဂဏန်းရှိသည်ဟုသာ သိရှိရသည်။
သို့ရာတွင် ယင်းတို့အနက်မှ မည်သည့်တပ်ဖွဲ့ခွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဖက်ခြမ်းတွင်အခြေစိုက်၍ နိုင်ငံတကာမူဆလင်အကြမ်းဖက်များန
ှင့် မည်သို့ဆက်သွယ်သည် ဆိုသည်ကိုမူ အသေးစိတ်သိရှိရန် ကြိုးပမ်းဆဲဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) ၏တပ်သားအများစုသည် တရုတ်နိုင်ငံလုပ် အေကေ-၄၇ အော်တိုမက်တစ်ရိုင်ဖယ်များ ၊ အပေါ့စားစက်သေနတ်များ၊ အာပီဂျီ(တူး) ဗုံးဆံလောင်ချာများ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ကို လက်နက်အဖြစ်ကိုင်ဆောင်ကြသည်။
ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ၁၉၉၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ တိုက်ခိုက်ရေးပြုလုပ်ခြင်းများ အားနည်းလာခဲ့သော်လည်း မြန်မာ-ဘင်းဂလား နှစ်နိုင်ငံဒေသအတွင်းတွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လက်နက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ခြင်းမှ ၀င်ငွေအများဆုံး ရရှိသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှ ရာဘိတယ်အလမ်အိုင်အစ္စလာမီ (Rabitaal-Alam-I-Islami) အဖွဲ့ ၏ ထောက်ပံ့ငွေများကို ရယူခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရသည်။
၁၉၈၀ခုနှစ် ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ဂျမတ်-အီ-အစ္စလာမီ (Jamaat-e-Islami) အဖွဲ့နှင့် အကြမ်းဖက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အစ္စလာမီချတ္တရရှီဘာ (Islami Chhatra Shibir) အဖွဲ့တို့မှ အကူအညီများကို စတင်လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင်အဖွဲ့အစည်းထူထောင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့သည် အင်အားကြီး ဆွန်နီမူဆလင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ဟာရာကတ်-အာလ်-ဂျီဟတ်-အာလ်-အစ္စလာမီ (Harakat-ul-Jihad-ul-Islami) ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိနေခဲ့သ
(HuJI) ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အာဖဂန်စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုးစစ်သားများကို ထောက်ခံရန်ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သ
အဆိုပါအဖွဲ့သည် အယ်ကေဒါနှင့်တာလီဘန်တပ်ဖွဲ့များ၏ ၀ါဟာဘီ နှင့် ဒျူရိုဘန်ဒီ (Wahabist and Deobandist) သင်တန်းနည်းလမ်းများကို မျှဝေသင်ကြားခြင်းများလည်းပြုလုပ်ရာမှ အင်အားကြီးမားကာ ကွန်ယက်များစွာလည်းဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့သည်။
(HuJI) သည် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ဝင်များကို တပ်သားအဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့မှုပြီး ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) နှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
အူခီယာ (Ukhia of Cox’s Bazar) ရှိ ဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့၏ စခန်းတစ်ခုကို (HuJI) အဖွဲ့မှ လက်လွှဲရယူခြင်းကြောင့်လည်း ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြယ်လှယ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
လစ်ဗျားသမ္မတ (ဟောင်း) မွမ်မာကဒါဖီ၏ ထောက်ပံ့မှုများ ရယူနေကြာင်း ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင် ၈ယောက်သည် လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်သင်တန်းများ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အထောက်အထားများအရ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) သည် ပါကစ္စတန် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသရှိ (HuJI) ယခုအခေါ် ဟာရကတ်-အူလ်-မူဂျာဟစ်ဒင် (Harakat-ul-Mujahideen) အဖွဲ့အစည်း၏ထောက်ပံ့မှုများလည်း ရယူခဲ့သည်။
အာဖဂန် စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သော ဂါဘူဒင်ဟက်မတ်ယာ (Gulbuddin Hekmatyar) ၏ ဟဇ်-အီ-အစ္စလာမီ (Hizb-e-Islami) လှုပ်ရှားမှုများတွင် ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင်အချို့ကို ပါဝင်စေခဲ့ရာမှ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့တွင် ချိတ်ဆက်မှုအား ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ ၃၅၀၀၀၀ (သုံးသိန်းခွဲ) ခန့်သည် နေထိုင်ကြပြီး အများစုသည် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး သင်တန်းကျောင်းများကို တက်ရောက်ကြသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ယင်းတို့အနက်မှ အချို့သည် တာလီဘန် အရာရှိများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ အခြားတာလီဘန်အဖွဲ့ဝင်ရိုဟင်ဂျာများသည် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှမှ တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခန့်အပ်ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ကြကာ ဟာရကတ်-အူလ်-မူဂျာဟစ်ဒင် (Harakat-ul-Mujahideen) အဖွဲ့၏ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းတွင် ဂျမားအယ်အစ္စလားမီးယား (Jamiya-I-Islami) အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဘာဟာနူဒင် ဟာဘာနီ (Burhanuddin Rabbani) နှင့် အစ်တီဟတ်-အယ်-အစ္စလာမီးယား (Ittehad-I-Islami) အဖွဲ့ မှ အက်ဘဒါရက်ရဇူလ်ဆာယက်ဖ် (Abdur Rab Rasool Sayyaf) တို့၏ ထောက်ပံ့မှုများကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ရယူနေမှုများကို နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်ထောက်လှမ်းရေးမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရှိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ (တစ်ရာ) ခန့်သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငတွင်းရှိ ခိုစ့် (Khost) မြို့ရှိ ဟဇ်ဘ်-အီ-အစ္စလာမီ (Hizb-e-Islami) အဖွဲ့ပိုင်သင်တန်းများတွင် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခြား ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အင်အား ၅၀၀၀ ခန့်သည်လည်း အလားတူသင်တန်းများကို ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်များက တက်ရာက်ခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
လေ့လာသူ ဘာတီးလ်လစ်တစ်တနာ (Bertil Lintner) ၏မှတ်တမ်းများအရ အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တစ်ဖက်သတ်လမ်းညွှန်ချက်များ ကို ခံယူကြရပြီး ခြေလျင်တပ်သား ၊ မိုင်းရှင်းလင်းရေးတပ်သားများ ဖြစ်လာကြသည်။
၎င်းတို့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကစ္စတန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ အသုံးချခံ စစ်ဖက်ပစ္စည်း အဆင့်မျှသာ သတ်မှတ်ခံကြရကြောင်း နှင့် ထိုအခြေအနေကို မနှစ်သက်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
မြန်မာမူဂျာဟစ်ဒင် များသည် တာလီဘန်အဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အမေရိကန်စစ်တပ်မှ အာဖဂန်အခြေစိုက်စစ်စခန်း ဖွင့်လှစ်ချိန်အထိ ရှိနေခဲ့သည်။
ယင်းတို့အနက်မှ အချို့ကို အမေရိကန်တပ်မှ လက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ “မြန်မာအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ရန် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု အတွေ့အကြုံများ ရယူနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး ကိုရမ်ကျမ်းစာကို လိုက်နာသောမူဆလင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ
် (Sharia Law) ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သွတ်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်” ဆိုသောထွက်ချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား အချို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့မရောက်ဖူးသော စစ်သွေးကြွများဖြစ်ကြသည်။
တာလီဘန်စစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားသော်လည်း အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း တာလီဘန်တို့ဘက်မှ ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့သော မူဂျာဟစ်ဒင်များသည် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနယ်စပ်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေး လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အပါအ၀င် အခြားတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့များအား သင်တန်းပို့ချနေမှုများကို ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်များက မြန်မာအစိုးရကို ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲမည်ဟု (ABMU) အဖွဲ့ကကြေငြာစဉ်က အာရပ်နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံများမှ မူဂျာဟစ်ဒင်များ အပါအ၀င် အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ စစ်သွေးကြွများကလည်း ပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ထို့အတူ ကတ်ရ်ှမီးယားဒေသမှ ပါကစ္စတန်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော ဟဇ်ဘူလ်မူဂျာဟစ်ဒင် (Hizb-ul Mujahideen) ကလည်း လေ့ကျင့်ရေးသမားများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မူဆလင်သူပုန်များကို လေ့ကျင့်မှုများပေးရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ၂၀၀၁အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီအထိ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများကို မြန်မာအစိုးရနည်းတူ အမေရိကန်အစိုးရသည်လည်း အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေတစ်ရပ်အနြေ
လက်ရှိအချိန်ထိ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင်မူဆလင်အကြမ်းဖက်တို့၏ နိုင်ငံတွင်းအင်အားသိသာစွာကြီးမားလာခြင်း သိသာထင်ရှားသောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ မဖြစ်ပွားအောင် မြန်မာအစိုးရမှလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
သို့ရာတွင် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ တိုက်ခိုက်မှုများ အပြီးတွင် နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုများအရ အကြမ်းဖက်ကွန်ယက်သည် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာကြောင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း အယ်ကေဒါအဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် သွယ်ဝိုက်သိမ်းသွင်းထားမှုများရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အမေရိကန်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် “အယ်ကေဒါ၏ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြီးမားဆုံးအဖွဲ့ခွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည်” ဟုပင် သတ်မှတ်သင်ကြားခြင်းခံရသည်။
သဘောတရားချင်းတူညီသော သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တစ်ရပ်ကို စီအန်အန် သတင်းကွန်ယက်ဌာနမှလည်း ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့ဖူးသည်။
ထိုကြေငြာချက်များကို အသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းးမရှိသေးသော်လည်း ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့၏အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အယ်ကေဒါအဖွဲ့သြဇာခံဖြစ်ကြောင်းကို အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့မှ သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ပါဝင်စားသူ ရိုဟင်ဂျာစစ်သားများ စုဆောင်းရန်အတွက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ လာရောက်သိမ်းသွင်းသူများသည် အယ်ကေဒါ အဖွဲ့မှ စေလွှတ်ခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း တိကျသောသတင်းများ ရရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်တို့၏ အာဖဂန်စစ်ပွဲမှတ်တမ်းများအရ အိုစမာဘင်လာဒင်၏ ဗီဒီယိုတိပ်ခွေတွင်လည်း အာရပ်ဘာသာဖြင့် “မြန်မာနိုင်ငံမှ မူဆလင်တရားတော်အလိုအရ တိုက်ခိုက်နေသူများ” ကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ကို သိရှိရသည်။
မှတ်တမ်းပြုစုရေးသားသူ - စာအုပ်ကြီး(FaceBook User)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:08 PM No comments:
အပျက်အပျက်နဲ့နှာခေါင်းသွေး ပျက်မဲ့ ကုလားမျိုး ယုတ်များ
မရှုမလှနဲ့ ပွဲ သိမ်းကြတော့မှာလား စစ်တပ်က "ဟ" ပေးထားတာ က ဘာအကြောင်းမို့ လဲ
သံဃာဆိုရင်ရိုက် ကျောင်းသားဆိုရင်ပစ်သတ်တဲ့ သတ်မတော် က ဘာလဲ ဘယ်လဲ
ခဏတာနောက်ဆုံးရ ညနေပိုင်း ဓါတ်ပုံများ 9.6.2012 ..10.12 မိနစ် pm
ဓါတ်ပုံ Hmuu Zaw
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:17 PM No comments:
U2တေးဂီတက ဘိုနိုနဲ့အတူ သီးချင်းဆိုဖို့ ဇေယျာသော်ကိုဖိတ်ကြား
U2 တေးဂီတအဖွဲ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက် မှုတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်တေး သံရှင် Bono က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပထမဆုံး ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ Walk On တေးသီချင်းဟာ ကမ္ဘာကျော်သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဥရောပခရီးစဉ်ကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ စတင်မှာဖြစ်ပြီး နော်ဝေး၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ ဗြိတိန် နဲ့ ပြင်သစ်တို့ကို သွားရောက်ကာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြန်လည်ရောက် ရှိပြီး ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့မှာ စတင်မယ့် လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကို တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:04 PM No comments:
မောင်းတောတွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့
Saturday, June 09, 2012 အိမ့်သံစဉ်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 6:39 PM No comments:
NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စ ကြေညာချက်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD ) နှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များစုပေါင်း၍ လတ်တလော ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ကြေညာချက်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်ကို ယနေ့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Statement by NLD and Ethnic Leaders (9-6-2012)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 6:08 PM No comments:
June 9, 2012 ဧရာဝတီ|
လင်းသန့်၊ နန်းဆန်နွမ်
ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေစေတီအနီးရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသူ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များကို ကိုမြအေး လာရောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ကြရန် ပြောဆိုနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ ကိစ္စရပ်များ၊ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် အမျိုးသားရေးဝါဒ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တဦးဖြစ်သူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး၏ အမြင်သဘောထားများကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် လင်းသန့်နှင့် နန်းဆိုင်နွမ်တို့က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
မေး။ ။ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မောင်းတောက ဆူပူရမ်းကားတဲ့ ကိစ္စ ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမြအေးရဲ့ အမြင်သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စက ဘာသာရေး အနေနဲ့ဆိုရင် လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး။ ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က အရင်ကတည်းက အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိတဲ့နေရာပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတော့ တော်တော်လေးကို မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်တယ်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံး သွားတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိုးအိမ်တွေကို အရင်လို မူလအတိုင်း ပြန်လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဒီပြဿနာကို ပြည်မကို မကူးစက်စေချင်ဘူး။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ အမျိုးသားရေးအနေနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေး၊ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတရပ်ကို ထုတ်ပေးစေချင်တယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်တွေ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ပါစေ။ အပြင်က ၀င်လာတဲ့ ကူးစက်လာတဲ့ ပြဿနာကို ကျနော် လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီအတွက် လုံးဝ ရှုံ့ချတယ်၊ ကန့်ကွတ်တယ် အဓိပ္ပာယ် မရှိဘူး။ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ပြီး လူရိုင်းဆန်တဲ့ကိစ္စကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောချင်တာက တာဝန်ရှိသူတွေ အဲဒီ ပြဿနာကို မြန်မြန်အရေးယူပေးပါ၊ အစိုးရက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ၀င်ထိန်းပေးပါလို့ ပြောချင်တယ်။
မေး။ ။ လတ်တလော ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေး ကိစ္စကနေ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုအသံတွေ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အပေါ် ကိုမြအေးက ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါက လတ်တလော လက်ငင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာပေါ့လေ။ ပြဿနာ တရပ်ဖြစ်ပေါ်ဘို့ဆိုတာ အကြောင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းများစွာ တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာ ဒီပြဿနာတွေဟာ မီးပွားတခုလို စပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။ ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီး ဖြစ်လာတဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစချင်း ရခိုင်အမျိုးသမီးလေးဖြစ်တဲ့ မသီတာထွေးကို မတရားပြုကျင့်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စက လူ့အဖွဲ့အစည်းက အင်မတန်မှ လက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပြင်ကို ရောက်သွားတဲ့ ကိစ္စ၊ ဘယ်ဘာသာတရား၊ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်စရိုက်ရှိတဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ် လက်မခံနိုင်တဲ့၊ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ အပြုအမူပေါ့ဗျာ။
အလားတူပဲ တောင်ကုတ်မှာ ခရီးသွား ၁၀ ယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ကြတဲ့ ကိစ္စကလည်း လူ့အသိုင်းအ၀န်းမှာ ဘယ်သူကမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါရှင်းပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘယ်သူကမှလည်း မြိန်ရည်ရှက်ရည်မပြောဘူး။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒီနေရာမှာတော့ ကျနော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမှာပဲ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်အမျိုးသား ဦးရေက ၃.၈ သန်း လောက် ရှိတယ်လို့ ကျနော် လေ့လာချက်အရ သိရတယ်။ တဘက်နိုင်ငံ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက သန်းရာကျော်ရှိနေတဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုတော့ ဖြစ်လာမယ့် အန္တရာယ်တွေကို ရခိုင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်မှာပဲ၊ ပူပန်မှာပဲ၊ ဒါအမှန်ပဲ။ အဲဒါကို အပြစ်တင်လို့ မရဘူး။ ဒါက ရခိုင်ရဲ့ အမျိုးသားရေး ၀ါဒဟာ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပြဿနာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတာဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြဿနာလို့ ယူဆရမယ်။
အလားတူပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့တယ်။ မနေ့ကဆိုရင် ဆရာတော် ၀ီရသူနဲ့ လိုင်းပေါ်မှာ စကားပြောရတယ်။ စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း သံတွဲမြို့ကို ဆရာတော်က ဥပမာ ပေးသွားတယ်။ သံတွဲမြို့က နေထိုင်သူတွေလို တဘက်နဲ့ တဘက်၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ တရားတွေအချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားပြီး နေထိုင်သွားရမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ကလည်း ဒီမြေပေါ်မှာ နေတယ်၊ ဒီရေသောက်တယ်၊ ဒီမြေကိုတော့ သစ္စာရှိရမယ်။
ကျနော် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တယောက်ပါ။ အဲဒီတော့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တယောက်အနေနဲ့လည်း ပြောဆိုနေခြင်း၊ တိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ လူများစု ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားကို လူနည်းစုက လေးစားရမှာဖြစ်သလို၊ လူနည်းစုကိုလည်း လူများစုက မထိခိုက် မနစ်နာအောင် တဘက်နဲ့ တဘက် အကာအကွယ်ပေးပြီး စောင့်ရှောက် သွားရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ သန်းပေါင်း ၆၀ လောက်ရှိတဲ့ လူတွေ လိုက်နာရမယ့် တရားလို့ ကျနော်မြင်တယ်ဗျ။ အဲဒါမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်လုံးဟာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ ဘာသာရေးအရ၊ လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ကင်းမဲ့တဲ့ စနစ်တခုကိုကျနော်တို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သွားနိုင်မှာပေ့ါဗျာ။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေ ဖြစ်ပေါ်တိုင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပေါ် တတ်တဲ့ အလေ့ရှိတယ်။ ဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လို ရှုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စက ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ ပုံသေနည်းကြီးတခုလို ဖြစ်နေပြီဗျ၊ တခုခုဖြစ်တိုင်း ဘာသာ ရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်တာက ဟိုး ကိုလိုနီ ခေတ်ကတည်းကနေ ဒီကနေ့ ခေတ်အထိ မရိုးနိုင်တဲ့ လမ်းဟောင်းကြီးပဲ။ အဲဒီဟာတွေကို တချို့တချို့သော အစိုးရတွေက လုပ်သလို၊ တချို့တချို့သော မသမာတဲ့ အုပ်စုတွေကလည်း လုပ်တယ်ဗျ။ ဒီနည်းလမ်းကြီးကို ပညာတတ်တွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူတွေကလည်း သိနေပါပြီ၊ ရိုးအီနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီထောင်ချောက်ထဲကို အကြိမ်ကြိမ် သိလျှက်နဲ့ ဆင်းသက်နေကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လို့ ဆင်းသက်နေကြသလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို ကျနော်တို့ စဉ်းစားရမယ်။ အဲဒီအဖြေရဲ့ အကြောင်းတရားကို ကျနော်တို့ မရှာဖွေကြည့်နိုင်ဘဲ ဘယ်လိုမှ ပြဿနာကို ရှင်းလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျနော်နားလည် တာကတော့ ကျနော်တို့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ကလည်း ဒီမှာ နေထိုင်တဲ့အခါမှာ တခြားသော ဘာသာဝင်တွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက်ကို ရှေ့ရှုရလိမ့်မယ်။ ဒီမှာက အစဉ်အဆက် နေထိုင်လာကြတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေရှိတယ်။ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမိုင်းမှာလည်း ကြားမှာပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ဦးပိန်တံတား ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဦးပိန်ဟာလည်း အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တယောက် ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ အများကြီးလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေတော့ ကျနော် ရွတ်မပြ နေတော့ပါဘူး။ မြန်မာမွတ်ဆလင် အနေနဲ့က ငါတို့ဟာ မြန်မာမြေ ပေါ်မှာနေတယ်။ မြန်မာ ရေ သောက်၊ မြန်မာဆန်စားပြီးကြီးတယ်။ မြန်မာပြည်အပေါ်မှာ သစ္စာစောင့်သိရမယ်ဆိုပြီးတော့ အားလုံးက ဒီလို စိတ်ထား ရှိကြပါတယ်။
သို့သော်လည်း တဘက်က အုပ်စုကနေပြီးတော့မှ တိုင်းတပါးကနေ ကူးယူလာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုတွေ၊ ဓလေ့စရိုက်တွေ၊ စကားပြောတာ ဆိုတာက အစပေါ့၊ ဒီလို ကျနော်တို့ ဆီကို တင်သွင်းလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေ အနေနဲ့က ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပြဿနာကို ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့် တကြောင်း၊ နောက်တခုက ပညာ အသိနည်းပါးမှုက တကြောင်းကြောင့် အသုံးချခံရတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်လာရတယ်ဗျ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံနဲ့ အတူ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ အစ္စလမ့်အရေး ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ကျန်တဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အများစုကို အသုံးချဖို့ လုပ်လာတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ဒါက တဘက်ယူလိုက်ပါ။
တဘက်ကလည်း Anti-Muslim (မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး) အုပ်စုပေါ့။ အဲဒီကလူတွေက ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အကြောင်းပြပြီးတော့ တခြားတခြားသော အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကို စည်းခြား ဆက်ဆံဖို့၊ ခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ လုပ်လာတယ် အဲဒီအခြေအနေတွေကို မဖျောက်ပစ်နိုင်ရင် ဒီထောင်ချောက်ထဲကို အခုအဝင်ရင်တောင်၊ နောက်တခါ ပြန်ဆင်းသက်ဦးမှာပဲ။
နောက်တချက်က ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်း ပြောပါရစေ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့က တဘက်က ဆင်းလာမယ့် အန္တရာယ်တွေကို နေ့နေ့ ညည ထိတ်လန့်ပြီးနေရတဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်သူနေချင်မှာတုန်း။ ဒါကိုတော့ ကျနော်တို့ နားလည်ရမယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေဖို့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံက လူတွေ စိတ်အေးချမ်းသာ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်၊ တဘက်က ပြိုဆင်းလာမယ့် အန္တရာယ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား တားပေးဖို့ နိုင်ငံရေး ပေါ်လစီတွေ အခုကတည်းက ချမှတ်ဖို့ လိုပြီလို့ ထင်တယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းတပါးသား ယဉ်ကျေးမှု ပုံတူကူးချထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေ ယူလာတဲ့ သူတွေထက်ထက် လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာ မွတ်ဆလင်တွေကို နည်းနည်း မျက်နှာသာပေးဖို့ လိုလာပြီလို့ မြင်တယ်ဗျ။ မျက်နှာသာပေးဖို့ ဆိုတာကလည်း တခြားအခွင့်အရေးတွေကို တောင်းနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မြန်မာ မွတ်ဆလင်တွေကို ဘာပေးပါ၊ ညာပေးပါ အဲဒီလိုမျိုး ကျနော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ မြန်မာ မွတ်ဆလင်တွေ အနေနဲ့ မြန်မာ့ ဓလေ့စရိုက်နဲ့ အညီ နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက် အစိုးရက ပံ့ပိုးပေးဖို့ လိုပြီိလို့ ကျနော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ စကားတခွန်းမှားလို့ မရပါဘူး။ ကျနော်အကြိမ်ကြိမ် ပြောနေပေမယ့် ဒီကနေ့ထက်ထိ တိုက်ကြတုန်း ခိုက်ကြတုန်း။ အဲဒါကြောင့် သတိနဲ့ ထားပြီး ဒီစကားတွေကို ကျနော်ပြောနေတာပါ။ နောက်တခုက ဒီစကားတွေကို ကျနော်ပြောနေတာဟာ လုပ်ကြံလီဆယ်ပြီးပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အတိုင်း ကျနော် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောနေတာ။ အဲဒီအတွက် ကျနော် မကြောက်လည်း မကြောက်ဘူး။ အားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ကျနော် အသင့်ရှိတယ်။ တာဝန်ယူရဲတဲ့ သတ္တိရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရကလည်း မြန်မာမွတ်ဆလင် အသိုင်းအ၀န်းရဲ့ Change ကို အားပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်ဗျာ။ အဲဒါမှလည်း ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တကယ့်ကို ဘာသာချင်း လေးစားမှုတွေ၊ လူမျိုးချင်း လေးစားမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါမြန်မာ မွတ်ဆလင် ပြဿနာနဲ့ ရခိုင်ပြဿနာ ၂ ခုကိုပဲ ကျနော် ညွှန်းတာ။ တခြားသော တိုင်းရင်းသားကိစ္စပါ တဆက်တည်း ပြောချင်တယ်။ တခြားတခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေ ကိစ္စလည်း ကျနော်တို့အနေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် တပြိုင်နက်တည်းမှာ ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းဆို သိပ်မကြာဘူးဗျ။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည် ညီညွတ်မှုရပြီး အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမှာပါ။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေဆိုတဲ့ ရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ နောက်ထပ် မဖြစ်ပေါ်အောင် မြန်မာမွတ်ဆလင်တဦးအနေနဲ့ရော၊ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတဦး အနေနဲ့ရော၊ နိုင်ငံသား တဦးအနေနဲ့ပါ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်စောစောက ပြောသလိုပဲ အစိုးရပိုင်းက မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့ လိုတယ်။ နောက်ဆုံးဗျာ၊ အစိုးရက မြေတောင်မမြှောက် ပေးချင်ရင်တောင်နေပါ။ အစိုးရအနေနဲ့ အမုန်းတရားတွေ ပိုပြီးပွားမယ့်ကိစ္စရပ် မျိုးတွေမှာ ၀င်ရောက်ပြီး တိတိကျကျ ထိမ်းသိမ်းပေး စေချင်တယ်။ ဆိုလိုတာက ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်တာက ကျူးလွန်တာပဲ။ ကျူးလွန်တဲ့အပေါ်မှာ ဘာသာရေးတွေ၊ လူမျိုးရေးတွေ ခွဲခြားနေဖို့ မလိုဘူးပေါ့။ မှုခင်းဂျာနယ်တွေလည်း ဖတ်နေကြတာပဲ။ လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှုဆိုတာတွေ ဖြစ်နေကြတာပဲ။ ဒီလို ကျူးလွန်တဲ့လူတွေဟာ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။
ဒီတခေါက် ထောင်ထဲရောက်တော့ ကျနော် သေဒဏ်တိုက်မှာ နေခဲ့ရတယ်။ ရေချိုးချတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အမှုဖြစ်စဉ်တွေကို ဖတ်ဖြစ်တော့ ထမင်းစားချင်စိတ်တောင် မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ဒီလိုပဲ ၅ နှစ် ကလေးလေးကို မတော်မတရားကျင့်ကြံပြီး သတ်လိုက်တဲ့ အမှုတွေလည်း တွေ့တယ်ဗျာ။ အလားတူ အသက် ၆၀ ကျော် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေကို သတ်ပစ်တဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ရှိတယ်ဗျာ။ အဲဒါတွေဟာ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ မရဘူး။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့လူတွေဟာလည်း ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့က ဘာသာတွေ လူမျိုးတွေနဲ့ ပြောလို့မရဘူး။ အကျင့်ပျက်တဲ့လူက အကျင့်ပျက်တာပဲ။ တကယ့်အများစုက အကျင့်ပျက်နေလား။ အကျင့်ပျက်တဲ့လူတွေကို မည်သည့် ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည့် လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နံပတ် ၁ လူ့အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အပြင်ကို ထုတ်ရလိမ့်မယ်။ နံပတ် ၂ အချက်က ကျနော်တို့အားလုံးဟာ လူသားချင်း အားလုံးအခြေခံ အတူတူပဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန် လေးစားပြီး ဆက်ဆံကြရမယ်။ နံပတ် ၃ မြန်မာပြည် အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသား Rights ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ နိုင်ငံသားတိုင်းကို ဘာသာရေးအရ၊ လူမျိုးရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိအောင် ကျနော်တို့ ဖန်တီးယူသွားရမယ်။ အဲဒီလို လုပ်မှ ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မြင်တယ်။
မေး။ ။ အားလုံးခြုံပြီး ကြည့်လိုက်ရင် ဒီဖြစ်စဉ်က တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်းချက်တွေကို ဖော်ပြနေတယ်လို့ ယူဆပါသလား။
ဖြေ။ ။ တရားဥပဒေဆိုတဲ့ ပြဿနာဘဲဗျ။ တရားဥပဒေဆိုတဲ့ သဘောတရားကို ပြောတာတော့ လွယ်တယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေက ပွစိတက်နေတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုလိုနီခေတ်က ဥပဒေလည်း အခုထက်ထိ ရှိနေတုန်း။ ဖဆပလခေတ်၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ နောက်တခါ န၀တ စစ်အစိုးရခေတ်၊ ဒီဘက် နအဖ စစ်အစိုးရ ခေတ်၊ အဲဒီတော့ အစရှိတဲ့ ဥပဒေတွေ အကုန်လုံးက ပွစိတွေတက်နေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အရေးပေါ် အက်အနေနဲ့၊ နိုင်ငံရေးတော့ ပါပြီပေါ့ဗျာ။ ၅ ည ၁၀ (က) ပုဒ်မတွေ၊ ဒီကနေ့ထက်ထိ ဖြုတ်ထားတာ မရှိသေးဘူး။ နောက် မှောင်ရိပ်ခိုမှုဆိုတာ အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ အခြေအနေတွေလို စသဖြင့်ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒါတွေကို ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ သေသေချာချာ ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ နိုင်ငံသားအားလုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေတရပ်ကို ရေးဆွဲပြဌာန်းပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာက အစကနေ ပြန်စလုပ်ရမှာ။ အများကြီးလုပ်ရမှာ။ အစိုးရကို ကျနော် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ အစိုးရကို Blame မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစိုးရက အခု အုပ်ချုပ်တာ တနှစ်ကျော်လေးပဲ ရှိသေးတယ်။ သို့သော် ကျနော်တို့ဘက်ကပြောတာက အစိုးရ အနေနဲ့ကလည်း ကျနော်တို့ ဒီဘက်က ပြောနေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ပြီးတော့မှ အားလုံးလေးစား လိုက်နာနိုင်တဲ့ မျှတတဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်အောင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က လည်းတင်သွင်းအတည်ပြုမယ်၊ အစိုးရကလည်း အဲဒီဥပဒေတွေအတိုင်း ဟိုးအောက်ဆုံး ၀န်ထမ်းအဆင့်အထိ လေးစားလိုက်နာတယ် ဆိုရင်တော့ တရားဥပဒေကို လေးစားမှုနဲ့ တရားဥပဒေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက် မှုတွေကို သန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်သော ပြည်သူတွေ ခံစားရမှာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥပဒေဟာ တဖက်ဖက်ကို ယိမ်းနေတယ်၊ ဥပဒေဟာ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားကိုပဲ အကာအကွယ် ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ် ကို သန်းပေါင်း ၆၀ က ဘယ်တော့မှ ရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
မေး။ ။ အခု ကိုမြအေး ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးဆိုတာ ပါလာပါတယ်။ ဒီကိစ္စကလည်း အတော် ကျယ်လောင် နေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမြအေးအနေနဲ့ရော ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော့်အမြင်နဲ့ ပြောရရင် ကျနော်က အရာ အားလုံးကို နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ အခြေခံအပေါ်က စဉ်းစားပါတယ်။ ပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာဟာတိုင်းရင်းသား တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တင်သွင်းလာတဲ့ အခြေအနေကျတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ စိုးရိမ်မှာပါပဲ။ ကျနော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား အဖြေပေးပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ကျနော်လုံးဝ လက်မခံပါဘူး။ ကျနော့်သဘောထား အပြတ်ပြောပြတာပါ။ ကျနော်မေတ္တာရပ် ခံချင်ပါတယ် ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ အတွက် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ဒီနိုင်ငံသားအားလုံး လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ အားလုံးတန်းတူ ရသင့်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ဗန်းပြပြီး အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ ဒုက္ခရောက်မယ့်၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်မယ့် ကိစ္စမျိုး မဖန်တီးကြဖို့ အားလုံးကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
မေ။ ။ ကိုမြအေးရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ Burma Campaign U.K က မဝေနှင်းပွင့်သုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်က အခွင့်အရေး တောင်းဆိုတဲ့သူပါဆိုပြီး ဝေဖန်ကြတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကောင်းပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ကျနော်ဖြေချင်နေတာကြာပါပြီ။ ကျနော်ထောင်က ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က လွတ်တယ်ဗျ။ လွတ်တဲ့အခါမှာ ကျနော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်တွေက ကျနော့်ဆီ သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလို ဒီလိုပဲဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ ကိုမြအေးရေ ထိန်းပေးပါပေါ့။ ကျနော့်သမီးနဲ့ ကျနော် ဖုန်းချက်ချင်း ဆက်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောပြမယ်ဗျာ။ ကျနော့်သမီးဟာ ၁၀ တန်းအောင်ပြီး နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားရတယ်။ ကျနော်က ကျနော့်သမီး ဘက်က လိုက်ပြီးပြောတယ်၊ ဘက်လိုက်ပြီးပြောတယ်လို့ ပြောကြမယ်ဗျာ။ ကျနော်ဘက်မလိုက်ပါဘူး။ ကျနော် ကျနော့်သမီးကို သမီး နားလည်သလား။ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်တယ်ဆိုရင် ပြော၊ နားမလည်ဘူးဆိုရင် သူများရဲ့ အသုံးချခံဘ၀ကိုတော့ မရောက်စေပါနဲ့၊ အဲဒီဟာကို မလုပ်ဖို့ မကိုင်ဖို့ဆိုတာကို ကျနော်ပြောတယ်။
နောက် Burma Campaign U.K က တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ ကျနော်တွေ့တဲ့ အခါမှာ ခင်ဗျားတို့ အဲဒီကိစ္စကို လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကို တိတိလင်းလင်းကျနော် ပြောကြားခဲ့တယ်။ ကျနော်ပြောတဲ့ အချိန်ကစပြီး သမီးကလည်း သူ့ကိုယ်သူ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နဲ့ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေတာ ခင်ဗျားတို့ နောက်ပိုင်းကြားမှာပါ။ ကျနော့်သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော် တာဝန်ယူတယ်။ သူလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကလေးဆိုတော့၊ လူငယ်ဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့က လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်က များတယ်။ ကျနော်တို့လိုတော့ နိုင်ငံရေးကို ဘယ်နားလည်နိုင်သေးမလဲဗျာ။ ကျနော် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ဆန္ဒပြတာမှာ သမီးဟာ ယောင်ပြီးတော့ ပါသွားမိတယ်လို့ ကျနော်နားလည်တယ်။ နောက်လုပ်စရာ အကြောင်းအရင်းလည်း မရှိသလို နောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာ ကျနော် အာမခံတယ်။ ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 5:36 PM No comments:
ဇွန်လ ၈ရက်နေ့ ၂၀၁၂ခုနှစ်....... BBC မှ ထူးဆန်းဖွယ်ရာကောင်းသော သတင်းတပုဒ်ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့သည်။
The Threat to National Sovereignty(အင်္ဂလိပ်/မြန်မာဘာသာပြန်)
" မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဆန္ဒပြသူများကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်း" Burma Police "fire on" protestors ဆိုပြီး အမှားတဝက် အမှန်တဝက်ဖြင့် သတင်းတပုဒ်တင်ဆက်သွားသည်။ ။
ထိုသတင်းထဲမှာ ရခိုင်ပြည် မောင်တော်မှ လူနည်းစု မူဆလင်များဟု မရှက်မကြောက် သုံးစွဲသွားခဲ့သည်။ တကယ်တမ်းမှာ လူဦးရေ သန်း ၁၇၀ကျော်ရှိသော တဘက်နိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလီများ (ရိုဟင်ဂျာဟု နာမည်ခံထားသူများ)၏ တရားမဝင် နယ်စစ်ဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်မူကြောင့် မောင်တော်မြို့ လူဦးရေ၏ ၉၈ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ ကျုးကျော်သူများနဲ့ပြည်နှက်နေ၍ ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများမှာသာ လူနည်းစုအနေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် သူတို့ရဲ့ ဇာတိရပ်မြေမှာ ရပ်တည်နေရပါသည်။
တခြား သတင်းဌာနများ, Twitter နဲ့ Facebook စာမျက်နှာများ၌လည်း မူဆလင်များ မြန်မာတိုက်ခိုက်မူ တွင်သေဆုံး၊ မြန်မာပြည်တွင် မူဆလင်များနှိပ်စက်ဖိနှိပ်ခံနေရ၊ ရိုဟင်ဂျာများအကျဉ်းအကျပ်အတိ ဒုက္ခ ရောက်နေကြဟူသော မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဇာတ်ခင်း၍ ကမ္ဘာအလည်တွင် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို အရှက်ရ၊ ခေါင်းမဖော်စေနိုင်ရန်အတွက် အကွက်ချ၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတင်းမှား များဖြင့် လုပ်ကြံခဲ့ကြသည်။
အစိုးရလုံခြုံရေးအဖွဲ့ များက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို အကြောင်းမဲ့ ပစ်ခတ်နေသည့် သဘော သက်ရောက်သွားအောင် သတင်းများကို မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ၍ တင်နေပါသည်။
တကယ်တမ်းမှာ အကြမ်းဖက် ဖျက်စီးမူများ၊ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားမူများကို ကျူးလွန်နေသည့် ထိုအကြမ်းဖက်သမားများ၏ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ရခိုင်လူမျိုးများအား ရန်လိုသတ်ဖြတ်မူများမှ ကာကွယ်သည့်အနေနဲ့မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့ က အခြေအနေကို ဝင်ရောက်ထိမ်းသိမ်းပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် တဖက်သတ် ဘက်လိုက်သော၊ အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်မူမရှိသော၊ ငွေမျက်နှာတခုတည်းကိုသာကြည့်သော၊ အကျင့်သိက္ခာမရှိသော သတင်းဌာနများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းများကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ကျနော်တို့မြန်မာတွေ ဒီကနေ့မှာ မျက်နှာပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသည် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝစွာဖြင့် တဘက်နိုင်ငံမှ တရားမဝင်နယ်စပ်ကျူးကျော် ခိုးဝင်မူများကို ဟိုးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကပင် ကြံကြံခံ၍ တွန်းလှန်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် အမြဲတမ်း ရန်လို၍ အကြမ်းဖက်မှုကို လိုလားကြသည့် အဆိုပါ ဘာသာလူမျိုးခြားများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည့် ပြဿနာများကို ဟိုးရှေးယခင်နှစ်များက ကျနော်တို့တတွေ သေသေချာချာ မသိရှိနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ သတင်းများကို အစိုးရသတင်းဌာနများနဲ့ တကွ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနများကပါ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ဖုံးဖိထားပေးခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဤကဲ့သို့ ရုပ်ဆိုးဖွယ်ရာ အကြောင်းခြင်း ရာများ သည် နောက်ဆုံးတွင် ဗူးပေါ်သလို ပေါ်လာခဲ့သည်။
ထိုသတင်းဌာနများသည် ဖြစ်ရပ်အမှန်ကိုတင်ပြရဲသည့် စိတ်ဓါတ်မရှိကြချေ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိနေသော မောင်တောမြို့နယ်တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာ သော ဘင်္ဂလီများသည် ဒေသခံ ရခိုင်အမျိုးသားများပိုင်သော ဆိုင်များ၊ အိမ်များကို ဖျက်ဆီးမီးရှို့ခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများကိုလည်း ဖျက်ဆီးမီးရှို့ခဲ့ကြသည်။ မြို့မ ဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး ရှိနေအိမ်များကို ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု များ ပြုလုပ်နေသဖြင့် ဒေသခံများမှ ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးနေရသည်။ ဒေသခံ ရခိုင်အမျိုးသားများကို လူကြီး၊ ကလေး၊ မိန်းမ၊ ယောက်ကျားပါမကျန် ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မူတွေ လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒေသခံ ရခိုင်အမျိုးသားများသည် သူတို့၏ အသက်အတွက် အိုးပြစ်၊ အိမ်ပြစ်ဖြင့် အသက်လုကာ ထွက်ပြေးကြရ၏။
မေလ ၂၈ရက်နေ့ ၂၀၁၂ခု
ကျောက်နီမော်ရွာမှ မသီတာထွေးဆိုသူ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးအား ဘာသာလူမျိုးခြား သုံ့းဦးမှ လုယက်၊ မုဒိမ်းကျင့်၍ ဓါးဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ ရက်ရက်စက်စက် ထိုးသတ်သွားပြီး မိန်းမင်္ဂါကိုပါ ယုတ်မာစွာဖြင့် ဒါးဖြင့် မွန်းသွားခဲ့သည့် အမှုမှ စတင်ပါသည်။
မသီတာထွေးမှာ စက်ချုပ်သမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇာတိဖြစ်သည့် သပြေချောင်းရွာသို့ အလည်အပတ်ပြန်လာစဉ်တွင် ထိုသို့အဖြစ်ဆိုးဖြင့် ကြုံဆုံရခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် များစွာသော ဒေသခံတို့မှာ ခံပြင်းဒေါသထွက်ခြင်းတို့ကို ခံစားရသော်လည်း တစုံတရာအကြမ်းဖက်ခြင်း မရှိဘဲ တရားဥပဒေအရ စီရင်ပေးနိုင်ရန်သာ ဒေသအာဏာပိုင်များအား တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။
မသီတာထွေးအား မေလ ၃၀ ရက်နေ့က သဂြိုလ်ခဲ့ပြီး ရမ်းဗြဲမြို့ခံ လူထု ၇၀၀ ကျော်ခန့် က မသီတာထွေး ဗလက္ကာရ ပြုကျင့်ခံရပြီး ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရသည့် အပေါ် မကျေနပ်သည့် အတွက် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် ရမ်းဗြဲမြို့ စောမဲကျီလမ်း၊ ရုံးတက်လမ်း၊ ရဲစခန်းထိ ချီတက်ပြီး မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထိ ချီတက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ ပြစ်မူကျူးလွန်သူဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ ကျောက်ထရံ ကုလားရွာမှ ထက်ထက် (၂၃)နှစ်၊ ရော်ဖိ (၁၈) နှစ်နှင့် လူယု (၂၁)နှစ်တို့ ကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ထိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြိးနောက် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွင် သံတွဲမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာလာသည့် ရိုးမသစ္စာမှန် လုံယာဉ်ကို သံတွဲ-တောင် ကုတ်လမ်းဆုံတွင် လူအများက ပိတ်ဆို့ကာ ယာဉ်ကိုရပ်တန့်စေခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်၌ လိုက်ပါလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား ဆွဲချရာမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားပြီး ယာဉ်ပေါ် ၌ လိုက်ပါလာသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းနဲ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့မှ ခြောက်ဦး၊ မြောင်းမြမြို့မှနှစ်ဦးနှင့် သံတွဲမြို့မှ နှစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းစာက ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ မဖြစ်သင့်သော လက်တုန့်ပြန်မှုသာဖြစ်၍ ထိုဖြစ်ရပ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက မကျေနပ်သောကြောင့် တရားဥပဒေအရ စီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးရန် စုဝေးဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ အာဏာပိုင်များ၊ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများက တရားဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်စီရင်ပေးမည်ဟု ဂတိများပေးအပ်ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ်တွင်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူများ ဦးဆောင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးစေခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ ၃ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ စက်ရုံစုရပ်ကွက်၌ စက်ရုံ စုဈေး ဈေးသူဈေးသားများ၏ ဆန္ဒကို ပြည်နယ်အစိုးရထံ တင်ပြပေးသူ ဦး အောင်သန်းဝေ ပျောက်ဆုံးရာမှ အဓိ ကရုဏ်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဦးအောင်သန်းဝေသည် စစ်တွေ မြို့ရှိ စက်ရုံစုဈေး (ယခင်အခေါ် နာဇီ ဈေး)တွင် ကောက်ခံသည့် အခွန် ကောက်ခံမှုနှုန်း များပြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဈေးသူဈေးသားများ၏ ဆန္ဒကို ပြည်နယ်အစိုးရထံ တင်ပြပေးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စက်ရုံစု ဈေးသည် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ပုဂ္ဂလိကသို့ လေလံဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သော ဈေးဖြစ်သည်။
ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင်စက်ရုံစုဈေး၌ ဈေးကောက် ကောက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာတစ်ခုကို ဦးအောင်သန်းဝေက ဖြေရှင်းပေးခဲ့ကြောင်း၊ ညနေပိုင်းတွင် ဦးအောင်သန်းဝေရှိနေသည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ လေလံလုပ်ခွင့် ရထားသော အဖွဲ့မှလူအချို့ လာရောက်ပြီး ရန်လိုသည့် အပြုအမူများ ပြုခဲ့ကြကြောင်း။ ထို့နောက်၎င်းအနေဖြင့် ညီဖြစ်သူ နေအိမ်သို့ ခေတ္တတိမ်းရှောင်နေခဲ့ကြောင်း ဦးအောင်သန်းဝေ၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
ဇွန်လ ၃ ရက် ည ၇ နာရီခွဲတွင် ဦးအောင်သန်းဝေ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်သန်းမြ အပါအ၀င် အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး အမှတ်(၁)ရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်း၏ခင်ပွန်းပျောက်ဆုံး နေကြောင်း အကြောင်းကြားစဉ် လူအင်အား ၅၀ ခန့်မှ ၂၀၀ ခန့်အထိစု ဝေးရောက်ရှိလာကြောင်း၊ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ စစ်တွေမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြကျော် ရောက်ရှိလာပြီး ဦးအောင်သန်းဝေအား ၎င်းကိုယ်တိုင် ရှာဖွေပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ဒေါ်အောင်သန်းမြတို့ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း။
ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် ဦးအောင် သန်းဝေသည် ရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိ လာပြီး ၎င်းမှာ ဦးအောင်သန်းဝေ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်ပြကာ စောင့်ဆိုင်းနေသော လူအုပ်ကြီးအား ပြောဆိုပြီး ရဲစခန်းအတွင်း ၀င်ရောက် သွားခဲ့ကြောင်း၊ စောင့်ဆိုင်းနေသူ များက ဦးအောင်သန်းဝေအား ဖမ်းဆီးသွားသူများကို ရှာဖွေစစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း၊ တောင်းဆိုသူများမှ လူစုမခွဲဘဲ ရဲစခန်းအား ဝိုင်းရံ၍ စီးနင်းရန်ကြိုးပမ်းသဖြင့် ည ၁၂ နာရီကျော်အချိန်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များက သေနတ်များကို မိုးပေါ် ထောင်ပစ်ခတ်ပြီး လူစုခွဲခဲ့ကြောင်း၊ သေနတ်များ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ခတ်သဖြင့် လူစုကရဲစခန်းအား ခဲများဖြင့် ပြန်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ရဲစခန်းအတွင်း အတင်းဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြကြောင်း။ ထို့နောက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် အခြေအနေရှုပ်ထွေးကာ နံနက် ၃ နာရီဝန်းကျင်တွင် မျက်ရည်ယိုဗုံးဖြင့် လူစုခွဲခဲ့ပြီး နံနက် ၅ နာရီဝန်းကျင် တွင် လူစုကွဲသွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင် သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်အ ရသိရှိရသည်။ အဆိုပါအဓိကရုဏ်းတွင် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် လူ ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုအချိန်အထိ ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များနဲ့ အမှားများမှာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံထားသူများရော ရခိုင်ဒေသခံများတွင်ပါ တာဝန်ရှိနေပြီး လက်ရှိ အစိုးရအနေဖြင့်လည်း တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဖြေရှင်းပေးရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုကတိပေးထားသည်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
၈ ရက်၊ ဇွန်လ ၂၀၁၂ခု
သောကြာနေ့ဖြစ်ပြီး ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ဘာသာရေး ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲများကို ဗလီများတွင် ကျင်းပမြဲကဲ့သို့ပြင် လူဦးရေ၏အများစုမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂလီများဖြစ်ကြသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့တွင်လည်း နံနက်ပိုင်း ဗလီတက်၍ ဝတ်ပြုဆုတောင်းသည်။
နေ့လည်(၁)နာရီခန့်တွင် မောင်တောမြို့မ ကျောက်ဗလီမှ ၀တ်ပြုပြီး ဆင်းလာသည့် ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ အင်အား(၁၀၀၀)ကျော်ခန့်သည် ကမ္ဘောဇ ဘဏ်အဆောက်အအုံ၌ အဖီချထားသည့်အမိုးအား ဆွဲချပြီး ဆူပူအော်ဟစ်ခဲ့သည့်အပြင် ယူနိုက်တက်တည်းခိုခန်းနှင့် နေအိမ်တစ်လုံးတို့အား ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြကြောင်း၊
နေ့လည်(၂)နာရီခန့်တွင် သီရိမင်္ဂလာခန်းမရှေ့ သဇင်တည်းခိုခန်း၊ စားသောက်ဆိုင် ဈေးတန်းအား မီးရှို့ခဲ့ရာ ဆိုင်ခန်း(၆)ခန်း မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ နာရီစင် နှင့် ဆေးရုံကြားရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဗဟိုကျောင်း)အနောက်ဘက် ဗိုလ်မှူးရွာသို့ မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း၊ မြို့ဦးရပ်ကွက်၌လည်း နေအိမ်(၂)လုံးအား မီးရှို့ဖျက် ဆီးခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ မောင်တော-အလယ်သံကျော်ကားလမ်းပေါ်ရှိ ဒူးချီးယားတန်း ကျေးရွာအုပ်စု ခရေမြိုင်(နတလ)ကျေးရွာနှင့် ညောင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရွှေရင်အေး (နတလ)ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်
ညနေ ၅နာရီ ၁၅ မိနစ်၊ ၈ ရက်၊ ဇွန်လ ၂၀၁၂ခု
ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက စတင်သည့် မောင်တောမြို့ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများတွင် ဖြစ်ပွားသည့် မငြိမ်မသက်မှုများကို ထိန်းသိန်းရန် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များနှင့် ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းသည့် လူအုပ်ကို ဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူ ဇော်ဟိန်း ဆိုသူ၏ တိုက်အိမ် ၃ ထပ်မှ စတင်ပစ်ခတ်သည့်နောက် ရဲများက ၎င်းတို့အားပြန်လည်ပစ်ခတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မောင်တောမြို့ပေါ်တွင် ဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူ ဇော်ဟိန်း ၏ နေအိမ် သုံးထပ်ပေါ်မှ လူအင်အား ၁၀ ဦးခန့်ဖြင့် လူအုပ်ထဲသို့ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း မောင်တောမြို့ခံက ပြောသည်။
မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်အကြား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ဘက်တွင် လက်နက်များ သိုဝှက်ထားသည့် သတင်းများ ယခင်ကတည်းက ရရှိထားသည်ဟု ဘူးသီးတောင် အခြေစိုက် တပ်ရင်းတရင်းမှ အမည်မဖေါ်လိုသူ တပ်အရာရှိ တဦးက ပြောသည်။ ယခုပစ်ခတ်မှုများမှာ ယင်းလက်နက်သိုဝှက်ထားမှုနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း ရှိမရှိ မသိရှိရပါ။
ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်း ရှိပြီး မောင်တောဆေးရုံသို့ တင်ပို့ထားရသည်ဟု သိရသည်။ ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ကိုမူ မသိရှိရသေးပါ။
ညနေပိုင်းတွင် ဆူပူသူ (၂၀)ဦးခန့်သည် မောင်တောမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွင်းသို့ ၀င် ရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့သာည့်အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ပုန်းရှောင်နေခဲ့ရကြောင်း၊
ဆေးရုံအရှေ့ရှိ မြို့မအရှေ့ရပ်ကွက်မှ နေအိမ်(၂)လုံးအား ထပ်မံမီးရှို့ခဲ့သည့်အတွက် ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပြည်သူများမှာ အနီးဝန်းကျင်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ ပြောင်း ရွှေ့တိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်း၊
ထို့ပြင် ဆူပူသူတို့၏ ရန်ပြုမှုများကြောင့် ဗိုလ်မှူးရွာမှ အောက်ပါ ဒဏ်ရာရ/သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း
(၅) ဦးလှမောင် (၆၅)နှစ် ဦးခေါင်းတွင် ဓါးခုတ်ဒဏ်ရာ(၁၀)ချက်၊ လက်သန်းပြတ်ရှဒဏ်ရာ
စစ်တွေမြို့တွင်လည်း ယနေ့တွင် မြို့၏ အနောက်ဘက် သဲချောင်းရွာအနီးတွင်ရှိသော စစ်တွေသုသာန်သို့ သွားရောက်သည့် နာရေး(၅)စီးမှာ သဲချောင်းရွာမှ ဘင်္ဂါလီများက ခဲများဖြင့် ပေါက်သဖြင့် သုံးစီးသာ မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ ကျန်နှစ်စီးမှာမူ ဆက်သွယ်၍ မရရှိသေးသဖြင့် စစ်တွေမြို့ပေါ်မှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး အပါး ၂၀ ခန့် အဆိုပါနေရာသို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့နောက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ခွဲခန့်တွင် စစ်တွေမြို့သို့ ကျန်ရှိသည့် ကားနှစ်စီး ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေတက္ကသိုလ်အနီးတွင်လည်း ရခိုင်လူမျိုးများ နေထိုင်သည့် မင်းဂံအကွက် (၃) နှင့် ဘင်္ဂါလီများ နေထိုင်သည့် ဘုမေ ရပ်ကွက်တို့ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ဖြေရှင်းရာ ပြေလည် သွားကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့ခံတစ်ဦးမှဆက်သွယ်သတင်ပေးပို့ရာတွင်"အခု လူမျိုးရေးထက် ဘာသာရေးဘက်ကို ပိုပြီး ဦးတည်နေပုံပေါက်နေတယ်။ မနက်ကလည်း ဗလီတွေမှ အစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်။ နောက်ပြီး စစ်တွေမှာက ရခိုင်နဲ့ ဘင်္ဂါလီက တစ်ဝက်ဆီလောက်ရှိတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မတွေ့ရသေးလို့ မြို့ခံတွေအနေနဲ့ မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားနေကြရပါတယ်"ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စစ်တွေမြို့ တက္ကသိုလ်အနီး မင်းဂံရွာကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဘုမယ်ရွာမှ ဘင်္ဂါလီများက ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် မင်းဂံရွာသားလေးဦး ဒဏ်ရာ ရှိကာ တစ်ဦးမှာ စစ်တွေ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အခြေအနေ ပြန်လည် တည်ငြိမ်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောမြို့အတွင်းသို့ တပ်မတော်မှ ၀င်ရောက် နေရာယူလျက် ရှိကြောင်း မောင်တောဒေသခံ တစ်ဦးက ည ၁၀နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် ပြောပါသည်။ မောင်တောမြို့ပေါ် ဒေသခံများမှာ စိုးထိတ်မှုများဖြင့် ပုန်းအောင်းနေရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မောင်တောမြို့နယ် ခရေမြိင် စံပြကျေးရွာရှိ ရဲစခန်းအား ည ၉ နာရီ ခွဲခန့်က ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အယောက် ၂၀၀ ခန့် ၀ိုင်းထားခဲ့သည့်အတွက် ရဲစခန်းမှ သေနတ်ပြစ်ခတ်ပြီး ဟန့်တားခဲ့ရာ ပြန်လည် နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောမြို့နယ် ကြိမ်ချောင်းအပိုင် လောင်ဒုံရဲစခန်းကို ကုလားတွေဝိုင်းထား ငခူရ နစကစခန်းက စစ်ကူလိုက်လား မောင်တောမြို့နယ်တခုလုံး ရွာ (၃၀) ကျော် မီးတိုက်ခံရတဲ့ထဲမှာ ဗမာလူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ နတလ (ခ) ခရေမြိုင် ရွှေရင်အေး အစရှိတဲ့ ရွာက ကလေးတွေ အများကြီးသေဆုံးသွားကြောင်း နှင့် ဝေသာလီရွာ ဘုန်းကြီ...းကျောင်း ရွာ ပြာကျသွားပြီ်ဖြစ်ကြောင်း အဓိက မီးတိုက်သောရွာတွေမှာ မောင်တောမြို့ပြင်နဲ့ မိုင်(၅)မိုင်လောက် ကွာဝေးတဲ့နေရာတွေကို အဓိကပစ်မှတ် ထားလို့ မီးတိုက် လူသတ် နေတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
မီးတိုက်တဲ့ နောက်ကွယ်က အေလ်ကိုင်ဒါ အဖွဲ့ဝင် RSO ရိုဟင်ဂျာ အီစ်လမ်မစ်နိုင်ငံ ထူထောင်ရေး ကုလားစစ်သွေးကြွ အုပ်စုက နောက်နေ့ ဝင်တိုက်လို့ မောင်တော မြို့ သိမ်းတိုက်ပွဲ အောင်ပွဲဆင်ဖို့ ဘုတ်သုံးစီးနဲ့ လာနေတဲ့သတင်းကြားတဲ့အတွက် မြန်မာစစ်တပ်က အချိန်မီ ဟန့်တားတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ နေရာတွေက အလယ်သံကျော် ဖက်က တက်လာသော ဘုတ်တစီးနဲ့တပွဲမောင်တောမြို့  အနောက်ဖက် သင်္ချိုင်းတည့်တည့် အောက်ဖက် မြစ်ထဲမှာတပွဲ ဖြစ်သွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာများနဲ့ပက်သက်၍ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသာခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး က အခုဖြစ်နေတဲ့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောကိစ္စသည် နယ်စပ်ကနေ တရားမ၀င် ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ပြည်ပသွေးထိုးလှုံဆော်မှုတွေပါ ပါနေတယ်လို့မြင်တယ်။ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့လည်းဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပြဿနာကို ကောင်းစွာနားလည်း သိကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြောဆိုနေကြတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်တယ်လို့ဘဲ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇအရရော ယဉ်ကျေးမှုအရရော ဘာသာစကား ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရရော ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများနဲ့ လုံးဝပတ်သတ်ခြင်းမရှိပါ ဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာတွေကြောင့်မို့လို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ အစိုးရ အဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ မျက်နှာမပျက်အောင် လုိုက်လျောမှုတွေပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ လူသားချင်းစာနာမှု ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဘက်က လက်ခံခွင့်ပြု ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်" လို့၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ မောင်တောမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း၊ ပြည်ပမှ သွေးထိုးလှုပ်ဆော်မှုများရှိနေနိုင်ကြောင်း၊ ယခုကိစ္စသည် နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုပါ ထိခိုက်လာနေကြောင်း၊ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
ကိုးကွယ်သူများအကြား ဖြစ်ပွားသော ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီကလည်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုသည်မှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်ရာကျော်ထဲတွင်မရှိသလို မြန်မာတိုင်းရင်းသားလည်းမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ၊
ညမထွက်ရ အမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည့် မောင်တောမြို့တွင်းသို့ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောအကြား အခြေစိုက်သည့် တပ်ရင်းများမှ စစ်တပ်များ လွန်ခဲ့သည့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ၀င်ရောက်လာပြီး မောင်တောမြို့တွင်းရှိ မြို့တွင်း နေအိမ်များ ရပ်ကွက်များအတွင်း ပိတ်မိနေသည့် ရခိုင်လူမျိုးများအား ရှာဖွေကယ်ထုတ်နေသည်ဟု မောင်တောမြို့ခံတဦးက ဆက်သွယ် ပြောဆိုသည်။
ယင်းတပ်များ ၀င်လာနေစဉ်မှာပင် ဗိုလ်မှူးရွာဘက်မှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး လူအုပ်စုလည်း မကွဲသေးပဲ တက်လာနေသည်ဟု ယင်းမြို့ခံက ပြောသည်။
သေနတ်သံများ လေးဘက်လေးတန်မှ ကြားနေရကာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မအိပ်နိုင်ပဲ အခြေအနေကို နားစွင့်နေကြရသည်ဟုလည်း ပြောသည်။
စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ရရှိသည့် ခိုင်လုံသည့် အခြား သတင်းတရပ်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်တပ်အင်အား အများစုမှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မြို့နယ်များသို့ လက်နက်ပြည့် ကျည်ပြည့်ဖြင့် ရောက်ရှိနေကြပြီဟု ဆိုသည်။
ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက အဖြစ်အပျက်နှင့် ယခုလတ်တလော ပစ်ခတ်မှုများတွင်ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ RSO Rohingya Solidarity Organization အဖွဲ့မှ ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်ဆိုသည့် သတင်းများ လည်း ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။
ယင်း RSO အဖွဲ့မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ခြမ်းတွင် အခြေစိုက်သည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ စခန်းတွင် တာလီဘန်များ စစ်သင်တန်းပေးဖူးကြောင်း စီအန်အန် သတင်းတရပ်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ဖူးသည်။
နံနက် ၁၀နာရီခွဲ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၂၊
ယနေ့မနက် မောင်တောမြို့မှ သိရှိရသည့် သတင်းများအရ မောရ၀တီနှင့် ကုန်းပြင်ရွာ ၂ရွာ မီးရှို့ခံရပြီး တောင်ကုန်းရွာကို ဘင်္ဂါလီများ လောလောဆယ် ၀ိုင်းထားသည်ဟု သိရသည်။
မောင်တောမြို့ကို ရေပေးဝေနေသည့် ကန်တော်ကြီးရေကန်ကို ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သူများက အဆိပ်ခတ်ထားသည် ဆိုသည့် သတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ရေပေးဝေမှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားကာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု သိရသည်။ မောင်တောမြို့ စည်ပင်သာယာမှ ကန်တော်ကြီးရေကန်မှရေကို မြို့နေလူထုတွက် ပေးဝေသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
အခြားသတင်းတရပ်တွင် တောင်ကုန်းရွာ အနီးမှကျေးရွာတရွာတွင် ကျောင်းဆရာမ (၅) ဦးအသတ်ခံရ သည်ကို ယနေ့နံနက်တွင် သိရသည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းသတင်းကို သီးခြား အတည်ပြုချက် မရသေးပါ။
မောင်တောမြို့နေ ရခိုင်လူမျိုးများက နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ရခိုင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည့် ကျေးရွာများဆီ စစ်တပ်က မရောက်နိုင်သည့် အဖြစ်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု လည်းပြောသည်။
ယမန်နေ့ညက RSO ဟုခေါ်သည့် ရိုဟင်ဂျာ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး လက်နက်ကိုင်များ မော်တော် ၃ စီးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမ်းသို့ ၀င်ရောက်လာရာ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုက်ပွဲ ၃ နေရာတွင်ဖြစ်ပွားသည်ဟု သိရှိရသည်။
မော်တော်တစီးတွင် အင်အား ၆၀ ခန့်ပါရှိသည်ဟုလည်း သိရသည်။ RSO အလံတင်ထားသည့် မော်တော်တစီးမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ကမ်းကိုလည်း ပြန်မကပ်နိုင်ဖြစ်ကာ နတ်မြစ်ထဲတွင် အချိန်တော်ကြာ ခုတ်မောင်းပြီးသည့်နောက် မြန်မာဘက်အခြမ်းကပ်လာရာတွင် ယင်းနေရာ၌လည်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ ။
ထိုသို့ဆိုလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းနေသူတို့မှာ ရိုဟင်ဂျာဟု အမည်ခံထားသော ဘင်္ဂလီလူမျိုး အကြမ်းဖက်သမားများသက်သက်သာဖြစ်ပြီး တဖက်နိုင်ငံမှ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ (RSO) အကူအညီဖြင့်
ကျနော်တို့၏ သာသနာ ကို ဗြောင်ဝင်ရောက်စွက်ဖတ်နေခြင်း သက်သက်သာလို့ ကောက်ချက်ချ စွတ်စွဲလိုက်ရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မူမျိုးဖြင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာကို ထိပါးလာခဲ့ရင် မည်ကဲ့သို့ တုန့်ပြန်မူမျိုးကို မဆို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအပေါင်းက အမြဲအသင့်ရှိနေပါသည် ဟု ဒီနေရာကနေ အလေးအနက်ပြောကြားလိုတယ်။
ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မူမျိုးကို မည်သည့်နိုင်ငံကမှ လက်ခံမည်မဟုတ်ပဲ ဆန့်ကျင်ရှုံချနေမှာဖြစ်တယ်လို့လဲ ကျနော်ရဲရဲကြီး ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကျောခြင်းကပ်ပြီး မတရားသော ကိစ္စမှန်သမျှကို ရဲရဲဝံဝံကြီး စုပေါင်းတွန်းလှန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၉ရက် ၂၀၁၂
Ref: YPI, Hmuu Zaw, Myo Set, EMG, PMN
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများသည် မောင်တောရှိရခိုင်ကျေးရွာများကိုသာမက ယခင်နအဖစစ်အစိုးအရမှ တည်ဆောက်ပေးထားသည့် နတလ စံပြကျေးရွာများ ဖြစ်ကြသည့် ခရေမြိုင်၊ မောရ၀တီ၊ ရွှေရင်အေး၊ ဝေသာလီ စသည့် ကျေးရွာများနှင့် ရွားဟောင်းများဖြစ်ကြသည့် ကန်သာယာ၊ ဗောဓိကုန်းစသည့် ရွာများကို ညဥ့်အချိန် ၈ နာရီဝန်းကျင်မှ စ၍ ဆိုက်တိုက် မီးရှို့ခဲ့ကြကြောင်း ကျေးရွာသားများက ပြောသည်။
A ridiculous news was broadcast from BBC World news.
They used the title "Burma police fire on protestors". It was totallyafalse news.
It is onlyahalf true/half false propaganda. Without shame, they usedaterm " Muslim minority" in Maung Daw at Arakan State.In fact, such Muslims are known as Rohingyas who are illegally migrated Bengalis. Around 98% of local residence in Maung Daw are Rohingyas who passed through border line between Myanmar and Bangladesh. Gradually, original ethnic Rakhines (Arakanese) became minorities in Maung Daw township, their native town.
On social networks like facebook and twitter and official pages of Burmese Exile Medias, main message of almost all news are that Muslims are fought dead;Muslims were oppressed; poor rohingyas. In reality, it isaplanned and intentional actions to spread fake news to make Myanmar more vulnerable to foreign pressures.They are twisting true facts to become wrong in suchaway that Myanmar Police Forces are firing into the Muslim Protestors just for oppression.
The truth is that Maung Daw was in chaos with the atmosphere filled with terror and violence on local Arakanese (Rakhines) which necessarily claims immediate control of police forces. Otherwise, massacre committed by Bengali Rohigyas will be fully carried out. In such case, biased and money-driven Media, and lobbying organizations made Myanmar to be ashamed of such violence and chaos.
In history, Arakanese (Rakhines),amajor ethnic group in Myanmar, served asahuman barrier to stop influx of Bengali migrants for several decades. Moreover, other major ethnics like Burmese, Shan, Karen, Kachin, Chin, etc haven't become aware of such social conflicts in that geographically and demographically dangerous area. Due to political instability inside Myanmar, such news can't be headlines in state medias and exile Burmese medias.However, lastly, real things taking place in Arakan state can no longer be hidden.
Most of exile Burmese media may be intentionally failed to broadcast news about violent attacks occurred in Maung Daw. At Maung Daw near Burma-Bangladesh border,thousands of Bengali Rohigyas destroyed houses and properties of local rakhines and burned them down. Temples, schools and local stores were completely destroyed. Homes around Myoma Buddhist Temple were set on fire and consequently every Arakanese (Rakhine) fled to secure places. Many local Arakanese (Rakhines) were brutally murderd by such Bengali including elderly and children. Arakanese (Rakhines) ran way for their survival leaving whatever they have.
The beginning of the whole process
On 28 of May, 2012, Thida Htwe, 26 yrs old, Arakanese lady was raped by three Bengali and murdered. Her neck was cut withasharp weapon and her vagina was penetrated until it was lacerated completely. Thida Htwe whowasatailor was murdered on the way back to her native village called Tha Pyay Chaung.This case sparked racial tensions among Rakhines and immigrant Bengali rohingyas. Consequently, many Arakanese marched towards Rambree Police Station on 30th of May, the funeral day of Thida Htwe to protest for justice. Criminals were arrested within 48 hours after Thida Htwe was murdered. They are Htet Htet(23), Rauphi(18) and Luyu (21) and now kept in police custody.However, on 3rd of June, 10 native Muslims were beaten till dead in the rage by local Rakines at Taung Gote township on their return to Yangon.6were from Taung Twin Gyi,2from Myaung Mya and the other two from Than Dwe township, according to the state medias.
Following such crisis, Muslims in Rangoon rallied at city center near Sule Pagoda to protest againstthe case of murdered 10 Muslims and the term Kala referring native Muslims which might beadiscriminating term in most Muslims' view, stated in State Medias. Myanmar government responded such demonstrations by giving promises to seek justice and commissionedaspecial task force to investigate that case.
On the 3rd of June also, U Aung Than Wai,ateam leader for shopkeepers inabazaar near Sittwe was missing temporarily and that wasacausative factor forasmall conflict in Set Yone Su quarter, Sittwe. U Aung Than Wai wasakey figure in presenting problems of marketers in that bazaar particularly for high daily tax on each shop.Actually, the tax collection right was auctioned on 2nd June, 2012 already and Bengali groups won it in that auction. Aung Than Wai was threatened by Bengali gangs for his claims on behalf of other shop owners and so he was hidden at his cousin's house.
Around7o'clock on the same date, Daw Aung Than Mya with other 10 ladies reported to Sittwe Police Station about her husband missing after small conflicts between Bengali gangs and Aung Than Wai occured. In the mean time, up to 200 Arakanese (Rakhine) people gathered in front of Sittwe Police Station (1) and the local civil authority chief, U Aung Mya Kyaw, came and promised to look for Aung Than Wai. After that, Aung Than Wai's family went back. But around 11.45 p.m, U Aung Than Wai appeared in front of the waiting Arakanese crowd showing his national identity card and went into police station probably for more security. The crowd started to claim to arrest Bengali gangs. The Arakanese crowd tried to raid police station which was why they were cracked down by police force using guns and gas bombs. 11 rakhines were injured in that case. Up to this stage, it is clear that both sides are responsible for crimes committed in Arakan state and Myanmar government was trying best to control the situation.
On Friday, Islamic Bengali worship at central mosque in Maung Daw. Around 1 o'clock, nearlyathousand of Bengali Rohingyas started to create riots in front of Kan Baw Za Bank. They threw stones into "United" guest house andahouse. Around2p.m. ,amarket branch was burned including Thazin guest house in front of Thiri Min Galar central hall and6local shops were burned down. After that, Baho monastry was set on fire and the fire spread to Bohmu village. In Myo Oo quarter in Maung Daw, two homes were burned and monasteries at Kha Yay Myine village and Nyaung Chaung village were burned as well.
5.15 p.m 8th June 2012
Polices were patrolling and arranging demolished Arakanese(Rakhine) to move towards secure places. At that time, from the building owned byacurrency broker Zaw Hein, Bengali rohingyas unexpectedly shot into the civilian crowd and the police were confronted with armed Bengali rioters. Armed rioters at Zaw Hein's building are supposed to be around 10 people. A police officer confirmed that they have already got information about arms collected by terrorists in that township. But connections between armed Bengali rohingyas and such arm collections are not approved yet. It was reported that gun shots has caused causalities but number of injured were not known yet. The injured were sent to Sittwe hospital.
In that evening also, nearly 20 Bengali rioters raided Maung Daw hospital and medical staff have moved to secure places. Two homes in front of that hospital were burned also and people were moved to safe monasteries.
Currently realesed list of causalities are as follows.
(1)Dr Khin Maung Latt, 63, stabbed abdomen
(2)Daw Than Yee (57), incised wound over scalp (reported that expired)
(3)U Kyaw Hla (78), incised wound over scalp
(4)U Thein Zaw (36), incised wounds over extremities
(5)U Hla Maung (65), several stabbed and incised wounds on body (expired)
(6) Four female teachers were murdered. Dead bodies of two were at hospital. (9th June)
In Sittwe,a funeral activity line was interrupted by Bengali from The Chaung village and three vehicles in the line turned back but the rest of two were left behind and unable to contact them. So, security forces and nearly 20 monks went to there and secured. In Sittwe University, attacks occurred between Bengali groups and Arakanese groups. But they are settled by Arakan local government minister.
According toaperson from Sittwe,capital of Arakan State, he thought that chaotic condition is likely to lead to religious conflicts rather than racial tensions.
"In the morning, they (Bengali) made meetings inside mosques.Half of the population in Sittwe are Bengali. We feel insecure now", he says.
Four villagers from Min Gan were attacked and treated at Sittwe hospital. Currently, Maung Daw is under military control. Around 200 Bengali surrounded the police station at San Pya village and so police tried to deter them by firing into the air.
Around 30 arakanese villages were burned down and Laung Don police station in Maung Daw district was surrounded by Bengali. A number of children were dead and Wai Thar Li monastery.
was also set on fire. Target areas were within5miles from Maund Daw city center. And there wasasmall battle between Al Qaeda supported Rohingya Solidarity Organization and Myanmar Army in the river. RSO was reportedly said that it has connections with Al Qaeda and their troops were sent to operate in Afghanistan.
For such riots, Ko Ko Gyi,astudent leader of 88 generations said that those problems can be partly due to exile forces and lobbying organizations working in some western countries. He says
" We want to say that some countries without knowing true history but trying to intervene in rohingya issues might be viewed asathreat to national sovereignty. Rohingyas has no tie with any of our ethnic groups genetically, culturally or linguistically. Because of local political tensions, successive governments have agreed to accept them according to requests frominternational organizations. This is just the sole aid from human right perspective" Ko Ko Gyi says.
"Clearly, this isn'taconflict between Buddhists and Islamist. And I believe that such problems might not be free from foreign proxies" Ko Ko Gyi says.U Khin Yee, Minister of Immigration, confirmed that Rohingya is not an ethnic group of Myanmar.
Maund Daw is under carfew and Myanmar troops entered Maung Daw to rescue Arakanese people blocked in some quarters. Bengali crowds rallied at burned Bo Hmu village are now marching towards Maund Daw. Sounds of gun fire are still heard and every one is now alert for security. From some resources, it is reported that majority of Myanmar military troops in Arakan state are now in place at Maung Daw township. They suspect that armed Bengali thugs can have strong connections with Al Qaeda supported Rohingya Solidarity Organizaion,aterrorist organization listed by the US government.
Lastly, we all Myanmar citizens view this problem as
" Foreign Invasion and The Threat to National Security".
Translated from Mr Maung Ko Thet's article.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:59 PM No comments:
ရေကန် အဆိပ်ခတ်သတင်းထွက်ပေါ်၊ RSO လက်နက်ကိုင်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်
ရေကန် အဆိပ်ခတ်သတင်းထွက်ပေါ်၊ RSO လက်နက်ကိုင်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်၊
မောင်တောမြို့ကို ရေပေးဝေနေသည့် ကန်တော်ကြီးရေကန်ကို RSO ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များအမည်ခံ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သူများက အဆိပ်ခတ်ထားသည် ဆိုသည့် သတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ရေပေးဝေမှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားကာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု သိရသည်။ မောင်တောမြို့ စည်ပင်သာယာမှ ကန်တော်ကြီးရေကန်မှရေကို မြို့နေလူထုတွက် ပေးဝေသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
အခြားသတင်းတရပ်တွင် တောင်ကုန်းရွာ အနီးမှကျေးရွာတရွာတွင် ကျောင်းဆရာမ (၅) ဦးအသတ်ခံရသည်ကို ယနေ့နံနက်တွင် သိရသည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းသတင်းကို သီးခြား အတည်ပြုချက် မရသေးပါ။
နောက်ဆုံးသိရှိရသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မရုံးမှ အရာရှိတစ်ဦးက ၄င်း၏ facebook စာမျက်နှာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့
၁၃၁၅ နာရီ။ မောင်တောမြို့ (၄)ရပ်ကွက်အား အင်အား ၃၀၀ ခန့်မှ မီးရှို့၊ သဇင် တည်းခိုခန်းနှင့် အိမ် ၄ လုံး မီးရှို့ခံရ။
၁၄၃၀ နာရီ။ မောင်တောမြို့ (၅)ရပ်ကွက် အင်အား ၃၀၀ ခန့်မှ မီးရှို့၊ အိမ် ၄ လုံး မီးရှို့ခံရ။
၁၄၃၀ နာရီ။ လ...ဗော်ဇားတံတား ကင်းစခန်း၊ မောင်တောမြို့သို့ ၀င်ရန် တောင်ဘက်မှ အင်အား ၇၀၀ ခန့် ရောက်ရှိလာရာ နစကမှတားဆီးခဲ့၊ အင်အား ၄၀၀ လှည့်ပြန်သွား၊ အင်အား ၃၀၀ ကျန်၊ လယ်ကွင်းမှဖြတ်ပြီး မောင်တောမြို့တွင်းဝင်။
၁၄၃၀ မှ ၁၅၀၀ ထိ ။ သရည်ကုန်းဘောင်ရွာအား အင်အား ၂၀၀ ခန့်မှ မီးရှို့၊ အိမ် ၁၀၃ လုံး မီးရှို့ခံရ။
၁၅၀၀ နာရီ။ ရွှေရင်အေး(နတလ)ရွာ၊ အင်အား ၂၀၀ ခန့်မှ မီးရှို့၊ ပစ္စည်းလုယက်၊ အိမ်ခြေ ၆၇ လုံး မီးရှို့ခံရ။
၁၅၀၀ နာရီ။ မောင်တောမြို့၊ ညောင်ချောင်းဈေးတန်း၊ ပစ္စည်းလုယက်၊ ဈေးဆိုင်တန်း မီးရှို့၊ ဈေးဆိုင်ခန်း ၁၉ ခန်း မီးရှို့ခံရ။
၁၅၀၀ မှ ၁၆၀၀ ထိ။ ခရေမြိုင်(နတလ)ရွာ၊ ဗောဓိကုန်း၊ ကင်းချောင်းရွာ၊ ကန်သာယာရွာ၊ ကံပြင်သာစည်ရွာစသည်တို့တွင် အင်အား ၃၀၀ ကျော်စီမှဝိုင်း၊ မီးရှို့၊ အိမ်ခြေ (၁၀၀)၊ (၂၃)၊ (၂၀)၊ (၄၀)၊ (၂၀)စီ မီးရှို့ခံရ။
၁၆၃၀ နာရီ ။ အောင်ဗလရွာ၊ အင်အား ၃၀၀ ကျော်မှဝိုင်း၊ နယ်မြေ(၆)ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်ချိန် ထွက်ပြေးသွား။
၂၀၃၀ နာရီ။ ဥဒေါင်း(နတလ)ရွာ၊ အင်အား ၃၀၀ ခန့်မှ မီးရှို့ရန် ၀ိုင်း၊ ကျားထိုးမည့် ပုံ လုပ်လာသဖြင့် သေနတ်ထောင်ပြီး ပစ်ဖောက်ခဲ့ရ။
၂၂၁၀ နာရီ။ ပြသားရွာ၊ အင်အား ၂၀၀/၃၀၀ မှ ၀ိုင်း၊ ပြန်ဆုတ်သွား။
၂၃၀၀ နာရီ။ ရပ်ကွက်(၅)၊ ၃၀၀ ခန့် အနားကပ်လာ၍ ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရ။
၂၃၀၀ နာရီ။ နယ်မြေ(၇) ပင်လယ်ပြင် ကမ်းခြေအနီး၊ စက်လှေ(၃)စီး ပင်လယ်ပြင်မှ ကမ်းခြေသို့ မောင်းနှင်ဆိုက်ကပ်လာ၊ ကမ်းခြေစောင့်အဖွဲ့မှ တွေ့ရှိ။
၂၃၁၅ နာရီ ။ မောရ၀တီရဲကင်း၊ ရဲကင်းအား မီးရှို့။
၂၃၁၅ နာရီ။ (၃)မိုင်စစ်ဆေးရေးစခန်းအနီး ဝေသာလီကျေးရွာ ၊ အင်အား ၃၀၀ ခန့်မှ ၀ိုင်း၊ မီးတုတ်နှင့်ပစ်၊ အိမ် ၅ လုံး မီးလောင်။
၂၃၄၀ နာရီ။ ရပ်ကွက်(၄)နှင့် ရပ်ကွက်(၅)ကြား၊ ၂၀၀ ဦးခန့် လူစုမခွဲဘဲ ရှေ့တိုး၊ အန္တရာယ် ပြုမည့် အနေအထား ပြုလုပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်ခဲ့၊ ဆုတ်ခွါသွား။
ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့
၀၁၁၀ နာရီ။ ရပ်ကွက်(၃)၊ အင်အား ၁၀၀ ခန့် ရပ်ကွက်မှ ခဲဖြင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် သေနတ် မိုးပေါ် ထောင်၍ ပစ်ခတ်ခဲ့ရ။
၀၃၀၀ နာရီ ။ ရပ်ကွက်(၄)၊ ဗိုလ်မှူးရွာ ။ အိမ်(၁)လုံး မီးရှို့ရန် ပြုလုပ်၊ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်၊ ပြန်ထွက်သွား။
၀၅၁၅ နာရီ ။ ဝေသာလီရွာ၊ အင်အား ၂၀၀ ခန့် ၀ိုင်းဖို့ ကြိုးစား၊ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်၍ ပြန်ထွက်သွား။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:54 PM No comments:
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်ပါပြီ။
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဟု ၈၈ တို့ ပြော
Friday, June 08,
ကိုမင်းကိုနိုင် : ကတော့
"အရင့်အရင်တုန်းက တရားဥပဒေ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန် တရားခံအစစ်ကို ရှာဖွေပြီးတော့ စစ်ဆေး အပြစ်ပေးတဲ့ နေရာမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နည်းခဲ့တာမျိုး၊ …. ဒီတော့ လူတချို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တရား ဥပဒေရယ်၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်ရယ်၊ ပြီးတော့ ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းအပေါ်မှာ သံသယရှိလာတယ်။ အားမလို အားမရ ဖြစ်လာတယ်။
အဲဒီ့အခါကျတော့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ကြတဲ့ လူတချို့က သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ပဲ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မိတဲ့အခါ ကျတော့ မလိုလားအပ်တာတွေ ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။
အဲဒီ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက တရားစီရင်ရေးဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတော့ တရားဥပဒေအတိုင်း၊ အမှန်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်တာကို ပြည်သူတွေအားလုံး စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်" လို့ ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောသွားတာပါ။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ပြောစကားအပြည့်အစုံကတော့--
"အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာ ဝင်များကြားမှာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အားလုံးကြားမှာ ဖြစ်ပွားနေ တဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါကို လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးအသွင် ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ မရိုးမသားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဖန်တီးမှုပဲလို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာ၊ သူတို့ခံစားမှုကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အလေးအနက်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား များအနေနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြဿနာကို ပြေလည်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အခါမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စတွေ၊ မပြောမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေက လွဲလို့၊ တော်တော်များများ ကို ရှောင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။
အခုနေမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက် လို့ ကျွန်တော်တို့အတိအလင်းပဲပြောပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာသည် ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ဘူးသီးတောင်-မောင်တောကိစ္စသည် နယ်စပ်ကနေ တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့၊ ဝင်ရောက်လာတဲ့၊ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ပြည်ပသွေး ထိုး လှုံ့ဆော်မှုတွေပါ ပါနေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ဘယ်ကမှ လက်ခံမယ့်နိုင်ငံမရှိသလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ လူသားချင်း စာနာမှုအရ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ စာနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ သဘောကောင်းမှု၊ လိုက်လျောမှုကို နိုင်ငံကြီး တွေကနေပြီးတော့ ဒီအားနည်းတဲ့နိုင်ငံက ဒီပြဿနာကို လက်ခံရမယ်လို့ ဖိအားပေးနေတာမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့က ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံသားအနေနဲ့ သီးခြားပြောပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အားလျော်စွာ တရုတ်ရှိတယ်၊ အန္ဒိယန်းလူမျိုး မျိုးနွယ်စုတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဘိုးဘွားဘီဘင် အဆက်ဆက်က နေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက် နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံ ယူခွင့်ရရှိထား တဲ့ နိုင်ငံသားတွေရှိ ပါတယ်။
အဲ့ဒါဟာ နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီတော့ ဘင်္ဂါလီပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသားအသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသား တစ်ဦးရဲ့ အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အပေါ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် မယ့်တာဝန်ကို နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပြည့်အဝ လက်ခံမှာပါ။ ဒါဟာ တရုတ်၊ ကုလား ကျွန်တော်တို့မခွဲပါဘူး"
"မောင်းတောမြို့မှာ ဒီကနေ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ အိမ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ ကြားရ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တနေ့က အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (၅)ဖွဲ့နှင့် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်း ပြီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ် ကို အစိုးရအနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိရောက်စွာ အရေး ယူပေး စေ ချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ပျက်စီးသွားတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိုးအိမ် အဆောက် အအုံတွေ ကိုလည်း မူလအတိုင်း ပြန်ဖြစ်အောင် အစိုးရအနေနဲ့ ကြပ်မတ်ပြီး ဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်။
မောင်းတောတွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်
Friday, June 08, 2012 အမိန့်ကြေညာချက်
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည့် မောင်းတောမြို့ ညမထွက်ရအမိန့်
မောင်တောမြို့တွင် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သည့် မီးရှို့မှုများ၊ လုယက်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက် မောင်တောမြို့ စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်တွင် ည ၆နာရီမှ နံနက် (၆) နာရီထိ ညမထွက်ရ အမိန့်နှင့် လူ (၅) ယောက်ထက်ပို၍ စုဝေးခြင်း မပြုရဟု ပုဒ်မ (၁၄၄) အရ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ဘုန်းတော်ကြီ...းကျောင်း တကျောင်းတွင် ခိုလှုံနေရသူ မောင်တောမြို့ခံ ကိုထူးက နောက်ဆုံး အခြေအနေကို ည၈နာရီခွဲတွင် YPI သို့ပြောဆိုရာတွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ အမိန့်ထုတ်ခြင်းကို ၎င်းအနေဖြင့် မကြားသိသေးကြောင်း ၊ စွန့်ပစ်ထားခဲ့သည့် နေအိမ်များမှ ပစ္စည်များအား လုယူသွားမှုရှိနေသဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေအိမ်သို့ ပစ္စည်းယူဆောင်ရန် လူအုပ်စုဖြင့် သွားစဉ် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အကြမ်းဖက်သူများက ဒါးများ၊ ဒုတ်များဖြင့် လိုက်လာ၍ ပြန်လှည့်လာခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
လမ်းပေါ်တွင် ရဲများကို မတွေ့ရတော့ပဲ လုံထိန်းရဲများကိုမူ တွေ့ခဲ့ရသည်ဟုလည်း ကိုထူးက ပြောသည်။ ၎င်းက “ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေတော့ စုတ်ပြတ်သတ်သွားပါပြီ” ဟု ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးရှုံးမည့်အရေးကို စိုးရိမ်စွာဖြင့် ပြောသည်။
မောင်တောမြို့ ရှိ INGO ၀န်ထမ်းများမှာ နေအိမ်မီးရှို့မှုများ အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက် UNHCR ရုံးဝင်းအတွင်းသို့ ပြေးဝင်ခိုလှုံနေရကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ယင်း ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးအတွင်းတွင် ခိုလှုံသူ ၅၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် အန်ဂျီအိုဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
အချို့ဝန်ထမ်းမိသားစုများမှာ နီးစပ်ရာ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ခိုလှုံနေကြသည်ဟုလည်း ယင်းဝန်ထမ်းက ပြောသည်။ ရခိုင်ရပ်ကွက်များတွင် အရပ်သားများက အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်လျှက်ရှိပြီး ပြင်ပသို့ ဖုန်းပြောဆိုရာတွင်လည်း အသံတိုးတိုးသာ ပြောဆိုရဲကြသည်ဟု ခိုလှုံနေသူက ပြောသည်။
သမ္မတရုံး အရာရှိဖြစ်သူက ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် “မောင်တောမြို့ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း လမ်းမကြီးများ၊ အများပြည်သူတို့သွားရာ လမ်း၊ လမ်းမကြီး၊ လမ်းသွယ်၊ လမ်းကြား၊ ဥယျာဉ် (သို့မဟုတ်) အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော ဗလီ၊ ကျောင်းနေရာများတွင် ၅ ဦး (သို့မဟုတ်) ၅ ဦးထက် ပိုသောသူများ စုဝေးခြင်း မပြုရန်နှင့် ညနေ(၁၈၀၀) နာရီအချိန်မှ နံနက်(၀၆၀၀) နာရီအထိ ကာလအတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၄၄ အရ ထုတ်ဆင့်လိုက်သည်” ဟု အမိန့် ကြေညာချက် အပြည့်အစုံကို ဖေါ်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ။
ညနေ ၅နာရီ ၁၅ မိနစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက စတင်သည့် မောင်တောမြို့ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများတွင် ဖြစ်ပွားသည့် မငြိမ်မသက်မှုများကို ထိန်းသိန်းရန် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ပြီးခဲ့သည့် မိနစ်ပိုင်းက စတင်ပစ်ခတ်နေကြပြီဟု မြို့ခံတဦးက YPI သို့ပြောသည်။
ရဲနှင့် ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းသည့် လူအုပ်ကို ဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူ ဇော်ဟိန်း ဆိုသူ၏ တိုက်အိမ် ၃ ထပ်မှ စတင...်ပစ်ခတ်သည့်နောက် ရဲများက ၎င်းတို့အားပြန်လည်ပစ်ခတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် အခြားအဖြစ်အပျက်တခုမှာ မောင်တောမြို့ရှိ ဆရာဝန်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာဦးခင်မောင်လတ် နှင့် ဇနီးဖြစ်သူအား ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အိမ်ဖေါ်ဖြစ်သူက ဓါးနှင့် ထိုးသဖြင့် ဇနီးဒေါ် သန်းသန်းရင်မှာ သေဆုံးသွားပြီး ဒေါက်တာ ဦးခင်မောင်လတ်အား ဆေးရုံသို့တင်ပို့ထားရသည်ဟုလည်း မောင်တောမြို့ခံက ပြောသည်။ ။
မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် စစ်တွေမြို့များ၌ မငြိမ်မသက်မှုဖြစ်ပွားနေ
ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နှင့် ပြည်နယ် မြို့တော် စစ်တွေမြို့များတွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကို အခြေခံသည့် မငြိမ်သက်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု မောင်တောနှင့် စစ်တွေတို့မှ လာသည့်သတင်းများ အရသိရှိရသည်။
မောင်တောမြို့တွင်မြို့အချက်အချာကျသည့် မြို့တော်ခန်းမအနီးရှိ လူနေအိမ်များနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အဦ...အချို့ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း မီးရှို့ခံရခြင်းများရှိကာ လူစုလူဝေးများဖြင့် ဈေးဆိုင်နေအိမ်များကို ဖျက်ဆီးခြင်းများရှိနေသည်ဟု ယင်းမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးများက သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်ဖေါက်ကာ လူစုလူဝေးကိုခွဲရန်ကြိုးစားသော်လည်း သိသိသာသာ အောင်မြင်မှုမရသေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့တွင်မူ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဆူပူ အကြမ်းဖက်ရန်လူစုလူဝေးနေသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က မျက်ရည်ယိုဗုံး အသုံးပြုကာလူစုခွဲခဲ့ရသည်ဟု မောင်တောမြို့ခံက ဆိုသည်။
မောင်တောတွင် စစ်တပ်ကိုလည်း အသင့်အနေအထားဖြင့် တပ်လှန့်ထားသည်ဟု လည်း၎င်းက ပြောသည်။
စစ်တွေမြို့တွင်မူ မင်းဂံရပ်ကွက်ရှိ ရခိုင်လူမျိုးများပိုင် ဆိုင်အချို့ ယနေ့နေ့ခင်းပိုင်းက ဖျက်ဆီးခံရသည်ဟု စစ်တွေမှလာသည့် သတင်းများအရ သိရှိရသည်။ ။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့၌ အခြေအနေ တင်းမာ
ဇွန်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့် မောင်တောမြို့၌ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်မည့် အရိပ်အယောင်များ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် စစ်တပ်က အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးစားနေကြောင်း လမ်းပေါ်တွင် စုဝေးနေသည့် ရာနှင့်ချီသည့် လူထုကို လူစုခွဲရန် ပြောဆိုသော်လည်း သတင်းရရှိချိန်ထိ စုဝေးနေဆဲဖြစ်သည်ဟု မောင်တောမှ လာသည့် သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:11 AM No comments:
အပျက်အပျက်နဲ့နှာခေါင်းသွေး ပျက်မဲ့ ကုလားမျိုး ယု...
U2တေးဂီတက ဘိုနိုနဲ့အတူ သီးချင်းဆိုဖို့ ဇေယျာသော်...
မောင်းတောတွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအဖ...
NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ ရခိုင်ပြည်နယ...
ဇွန်လ ၈ရက်နေ့ ၂၀၁၂ခုနှစ်....... BBC မှ ထူးဆန်းဖွယ်...
ရေကန် အဆိပ်ခတ်သတင်းထွက်ပေါ်၊ RSO လက်နက်ကိုင်များနှင...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ြ...